Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသရန် Dopaminergic လမ်းကြောင်းများပြုပြင်ခြင်း (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
Erectile အလုပ်မဖြစ် (2016) ဆက်ဆံဖို့ Dopaminergic Pathways ၏ Modulation
အခြေခံပညာ Clin Pharmacol Toxicol ။ 2016 အောက်တိုဘာ; 119 ပျော့ပျောင်း 3: 63-74 ။ Doi: 10.1111 / bcpt.12653 ။
Simonsen ဦး1, Comerma-Steffensen က S2,3, Andersson Ke2.
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ၏လက်ရှိအကြံပြုပထမဦးဆုံး-line ကိုကုသ, phosphodiesterase type ကို5inhibitors (PDE5i), ဥပမာအား sildenafil အဘို့, သွေးကြောမူရင်း ED နှင့်အတူအများအပြားလူနာအတွက်ထိရောက်မှုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီကုထုံးယောက်ျား၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 30-40% အတွက်မလုံလောက်သောဖြစ်ပါသည် ED နှင့်အတူတစ်အာရုံခံချစ်ခင်လည်းရှိ။ အခြေအနေကိုဆက်ဆံဖို့ဝတ္ထုချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဝယ်လိုအားရှိပါသည်။ ကျနော်တို့ erectile function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် dopaminergic လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲပစ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြန်လည်သုံးသပ်။ Dopamine D1 (D1 , D ကို5 ) - နဲ့ D2 (D2 -D4 paraventricular inရိယာ၌ medial Pre-optic ,ရိယာ, ကျောရိုးနှင့် erectile တစ်သျှူးအတွင်းရှိ receptors များသည်စိုက်ထူခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါကုသမှုအတွက်တီထွင်ထားသော Agonists များသည် libido တိုးပွားလာသည်။ အထွေထွေ၏ဘာသာစကားကိုအုပ်ချုပ်မှုမှ ED ကုသမှုအတွက်ကုထုံးပြတင်းပေါက်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် dopamine အဲဒီ receptor agonist apomorphine ဒါပေမယ့် PDE5i နှင့်နှိုင်းယှဉ်အဓိကအား erectile function ကိုအပေါ်အောက်သာထိရောက်မှုကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ : D ကကမကထပြုခဲ့ဆေးထိုး-ကန့်သတ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုရှောင်ကြဉ်ရန်2 receptors, ပျို့ခြင်းနှင့် emesis, dopamine D4 အဲဒီ receptor agonists ဖွံ့ဖြိုးပြီး, သူတို့ကြွက်များတွင်စိုက်ထူသွေးဆောင်, ဒါပေမယ့်ဒီဆေးတွေဆေးခန်းမိတ်ဆက်ဘယ်တော့မှကြ၏။ အဆိုပါβ-lactamase inhibitor clavulanic အက်ဆစ်တိုး dopamine နှင့် serotonin နဲ့တိုးမြှင့်ဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ arousal နှင့်စိုက်ထူပေမယ့်ဆေးထိုး-တုံ့ပြန်မှုကွေးခေါင်းလောင်း-ပုံဖြစ်ပါတယ်။ Bupropion ၏တားစီးဘို့ကို select ရှိပါတယ် dopamine reuptake သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သက်သာစေနိုင်ကြောင်းဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဤအရပ်မှ ED ဆက်ဆံဖို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ချဉ်းကပ်ပေးကတခြားလက္ခဏာဆေးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လက္ခဏာတွေ။ အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, dopaminergic လမ်းကြောင်း၏မော်ဂျူ ED ၏ကုသမှုတိုးတက်လာဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုပေးပါသည်။
Doi: 10.1111 / bcpt.12653
စိုက်ထူ intracavernous နှင့် helicine သွေးလွှတ်ကြောများ၏ vasodilatation အဆိုပါ corpora cavernosa တိုးမြှင်သွေးလွှတ်ကြောအသှေးကိုဝင်ရောက်လာခဲ့သည်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦး hemodynamic ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စိုက်ထူကွဲပြားခြားနားသောအလယ်ပိုင်းနှင့်အရံအာရုံကြောနှင့် / သို့မဟုတ်ဟာသယန္တယားကပါဝင်ပတ်သက် 1။ ဗဟို neurotransmitters နှင့် neuropeptides ဥပမာ dopamine (DA) အတွက်, လွယ်ကူချောမွေ့, ဒါမှမဟုတ်တားစီးနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ (ဥပမာ opioid peptides) penile စိုက်ထူအများအပြားဟာဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်သရုပ်ဆောင်သည်။ serotonin ပါဝင်ပတ်သက်အဲဒီ receptor မျိုးကွဲပေါ် မူတည်. နှစ်ဦးစလုံး facilitatory နှင့် inhibitory သက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုနိုင်ပါတယ် 2.
စာနာ (noradrenaline, ATP) မှဖြန့်ချိ Peripheral neurotransmitters နှင့် parasympathetic (acetylcholine, နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်, vasoactive အူလမ်းကြောင်း peptide) အာရုံကြောဟာ corpora cavernosa, Corpus Spongiosum အများနှင့် glans လိင်တံဝင်ရောက်စိုက်ထူခြင်းနှင့် detumescence စဉ်အတွင်းသွေးစီးဆင်းမှုကိုထိန်းညှိ 1, 3, 4။ ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါနှင့်ဆီးချိုရောဂါခုနှစ်, erectile တစ်ရှူးအတွက် neuropathy အဖြစ်ရံ contractile နှင့်အပန်းဖြေအချက်များအကြားတစ်ဦးမညီမမျှ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှ (ED) ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ် 5.
လက်ရှိလမ်းညွှန်ချက်များ ED ၏ပထမဦးဆုံး-line ကိုကုသမှုအဖြစ်, phosphodiesterase type ကို5inhibitors (PDE5i), sildenafil, vardenafil, tadalafil နှင့် avanafil အကြံပြု; သို့သော် ED နှင့်အတူယောက်ျား၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 30-40% PDE5 inhibitor ကုထုံးတုံ့ပြန်ကြပါဘူး 6, 7။ အာရုံကြောပျက်စီးမှုများတွင်ဆီးချိုရောဂါဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့သွေးကြောရောဂါခံစားနေရပြီးလူနာ PDE5 inhibitors မှခံနိုင်ရည်ဖြစ်နိုင်သည် 8။ ဤရောဂါများအပြင်, ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် (CNS) ရောဂါဆေး, စိတ်မကျဆေး Antidepressants, antipsychotics နှင့် anxiolytics ကဲ့သို့လည်း erectile function ကိုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ 5။ ထိုကဲ့သို့သောရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) နှင့် venlafaxine အဖြစ်စိတ်မကျဆေး Antidepressants, အဆိုး, ယောက်ျားကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို (အလိုဆန္ဒ / arousal-စိတ်လှုပ်ရှား-အော်ဂဇင်) ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဖြစ်ပွားမှု SSRI နဲ့နှိုင်းယှဉ်, နိမ့်ပေမယ့် bupropion, nefazodone နှင့် mirtazapine ကဲ့သို့အခြားစိတ်မကျဆေး Antidepressants, လည်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုထိခိုက်စေ 9။ ခံစားချက်မမှန်အပြင်, စိတ်မကျဆေး Antidepressants လည်း neuropathic နာကျင်မှုဆက်ဆံဖို့အသုံးပြုကြသည်; ထို့ကွောငျ့, စိတ်မကျဆေး Antidepressants အားဖြင့်သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဟာပိုမိုကျယ်ပြန်လူဦးရေသာသက်ရောက်သည်။ အချို့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့ sildenafil လက္ခဏာဆေးဝါးအားဖြင့်သွေးဆောင် ED တညျ့; သို့သော်ကြောင့် PDE5 inhibitors မှ Non-ဖြေဆိုသူတစ်ဦးတိုးပွားလာရန်, ED ၏ကုသမှုမှဝတ္ထုချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဝယ်လိုအားလည်းမရှိ။ တစ်ခုချဉ်းကပ် erectile function ကိုများအတွက်အရံလမ်းကြောင်းဒါပေမယ့်လည်းအရေးပါမှု၏ဗဟိုလမ်းကြောင်းမသာပစ်မှတ်ထားမှဖြစ်လိမ့်မည်။ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, neurotransmitters တစ်စီးရီးနှစ်ခုလုံးကိုဗဟိုနှင့်အရံအဆင့်ဆင့်မှာ erectile function ကိုပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်နှင့်မကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များတစ်စီးရီးအသေးစိတ်အတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ကြ 1,2လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် monoamines နှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများ 10။ ပညာရေးအဘို့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတအောလတ်တလောမူးယစ်ဆေးဝါးများအချို့ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့တစ်ဦးကပြည့်စုံပြန်လည်သုံးသပ်လည်းအကြံပြုနိုင်ပါသည် 11။ ပါကင်ဆန်ရောဂါကုသမှုအတွက် dopaminergic အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ဆေးများစွာကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးထိုဆေးများအနက်မှအထွေထွေ dopamine receptor agonist apomorphine သည်ထုထည်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ 12-15။ ထို့ကြောင့်ပစ္စုပ္ပန် MiniReview များ၏အာရုံစိုက် erectile function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် dopaminergic လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲပစ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုစဉ်းစားရန်ဖြစ်ပါသည်။
Erectile ရာထူးအမည်တွင်ပါဝင်ပတ်သက် Dopaminergic Pathways
erectile function ကိုထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်ဗဟိုလမ်းကြောင်းဖြစ်သော medial Pre-optic ဧရိယာ (MPOA) အဖြစ်အတော်ကြာဦးနှောက်ဧရိယာများ, hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ (PVN), အ ventral tegmental ဧရိယာသည် hippocampus, အ amygdala ၏အိပ်ရာနျူကလိယတို့ပါဝင်သည် အဆိုပါ stria terminalis သည်နျူကလိယ accumbens, အ medulla oblongata နှင့်ကျောရိုး 2, hypothalamus ၏ PVN နှင့် ventral tegmental ဧရိယာအထူးအရေးကြီးလှသည်ဘယ်မှာ 2, 15။ , neurotransmitters ၏တစ်ဦးကစီးရီးစိုက်ထူ၏ဗဟိုစည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်နှင့်သူတို့ erectile function ကို (ဥပမာ noradrenaline, enkephalins တားစီး, (dopamine, နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်, အချိုမှု, acetylcholine, oxytocin, hexarelin peptide, ACTH, MSH နှင့်လိုလားသူ VGF) erectile function ကိုလွယ်ကူချောမွေ့ ဂါဘမြို့သားများနှင့် endocannabinoids) သို့မဟုတ် erectile function ကိုလွယ်ကူချောမွေ့နှင့်တားစီးနှစ်ဦးစလုံး serotonin ၏အမှု၌ 2။ Dopamine ဟာ CNS အတွက်အဓိက neurotransmitter ဖြစ်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, သုတ်ရည်ထိနဲ့လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် 1, 16။ erectile function ကိုအဘို့အအရေးပါမှုဖြစ်ထင် Dopamine သည်, MPOA နှင့် hypothalamus ၏ PVN နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်ဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီနေသည်။ ဤသုံးပါးသောဒေသများတွင်အဆိုပါ incertohypothalamic system ထဲကနေ dopaminergic innervation လက်ခံရရှိ 17။ အဆိုပါ PVN ခုနှစ်, dopamine ဖြစ်ကောင်းအာရုံခံနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase (nNOS) ၏ activation အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်တိုးပွားလာ intracellular ကယ်လစီယမ်အားဖြင့် oxytocinergic အာရုံခံ၏ activation စေပါတယ်။ တစ်သိသိ GMP-လွတ်လပ်သောလမ်းကြောင်းမှတဆင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ဖြစ်ကောင်း nitrosylation အဆိုပါ oxytocinergic အာရုံခံ (သင်္ဘောသဖန်း၏ activation ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရန်စဉ်းစားနေသည်။ 1) ။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ကိုဆင်းနှင့်တက်-ထိန်းညှိသည့် PVN အတွက် nNOS ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး, အသီးသီး nNOS နှင့်သင်းနှင့်လည်း exogenous testosterone ဟော်မုန်းများကဖွဲ့စည်းသည် 2.
(အနက်ရောင်နဲ့ရေးဆွဲ) penile စိုက်ထူတွင်ပါဝင်ပတ်သက် Dopaminergic လမ်းကြောင်း။ စိတ်ကူးစိတ်သန်း, မှတ်ဉာဏ်ပြန်လည်သိမ်းဆည်း, olfactory, အမြင်အာရုံနှင့်ထိတွေ့နိုင်သောလှုံ့ဆော်မှု cortex အတွက်လုပ်ငန်းများ၌နှင့် dopamine: D များ၏ activation အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယတိုးမြှင် dopamine အဆင့်ဆင့်ဦးတည်သွားစေကြသည်2, D ကို3, D ကို4 receptors နှင့် oxytocinergic အာရုံခံအတွက်အာရုံခံနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase (nNOS) လှုပ်ရှားမှုအတွင်းတိုးထားတဲ့စီမံကိန်းကိုအာရုံခံ activated နှင့် parasympathetic အာရုံကြောမှတစ်ဆင့် erectile တစ်ရှူးအတွက် nNOS ၏ activation ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနေကြသည်ရှိရာကျောရိုး၏ lumbosacral အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပါအဝင်အပို-hypothalamic ဒေသများဖြစ်သည်။ အဆိုပါကျောရိုး၏ lumbosacral အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့် erectile တစ်ရှူးအတွက် dopamine receptors ၏ activation ကိုလည်းစိုက်ထူအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။
ထို့အပွငျ dopaminergic အာရုံခံအဆိုပါ caudal hypothalamus ထံမှခရီးသွားသည့် lumbosacral ကျောရိုးအတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့် somatic အရေးပါ innervate မှဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ 18, 19။ ထို့ကြောင့် dopamine အဆိုပါ penile တုံ့ပြန်မှု၏နှစ်ခုစလုံးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့် somatic အစိတ်အပိုင်းများ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွင်ပါဝင်ရန်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ PVN oxytocinergic အာရုံခံအဆိုပါ neurohypophysis နှင့်အခြားဦးနှောက်ဒေသများသို့, ဒါပေမယ့်လည်း medulla oblongata ကြောင့်မအင်္ဂါ innervating လိုလားသူ erectile lumbo-sacral parasympathetic အာရုံခံ၏ activation မှဦးဆောင်ရှိရာကျောရိုးမှပရောဂျက်။
သည်မှာတစ်ကျောရိုး dopaminergic လမ်းကြောင်း erectile function ကိုအဘို့အအရေးပါမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အမျှင် dopamine မှ immunoreactive အဆိုပါ thoracolumbar စာနာကွင်းဆက်များနှင့်လည်း lumbosacral parasympathetic နျူကလိယရှိ 20, 21။ ထို့အပြင်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ dopamine: D2 အဲဒီ receptor စကားရပ် lumbosacral parasympathetic အာရုံခံ၌တွေ့ 22။ ကျောရိုးအဆင့်မှာတစ်ဦး dopaminergic လမ်းကြောင်းများအတွက်ထပ်မံပံ့ပိုးကူညီမှုဟာ thoracic T8 အစိတ်အပိုင်းမှာကျောရိုးကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူကြွက်များတွင်, system ထုံမွှန်းအဆိုပါ dopaminergic agonist apomorphine dopamine: D အားဖြင့် antagonized တစ်ယန္တရားအားဖြင့်ကြွက်များတွင်စိုက်ထူသွေးဆောင်နိုင်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်မှလာ2 အဲဒီ receptor ရန် (haloperidol, sulpiride) နှင့်တစ်ဦး dopamine: D အားဖြင့် facilitated1 အဲဒီ receptor ရန် (SCH23390) 23။ ယင်းတွေ့ရှိချက်ကိုလည်း apomorphine ၏ intrathecal အုပ်ချုပ်ရေးအလိုအလျောက် erectile တုံ့ပြန်မှု induces သောလေ့လာတွေ့ရှိချက်များကထောက်ခံခဲ့ကြသည် 24.
penile စိုက်ထူအဆိုပါစာနာအာရုံကြောနှင့် penile သည်သွေးလွှတ်ကြော dilatation နှင့် corpora cavernosa ၏ erectile ချောမွေ့ကြွက်သားဆဲလ်များအပန်းဖြေဖို့ဦးဆောင် parasympathetic တင်ပါးဆုံတွင်းအာရုံကြော၏ activation ၏တားစီးနေဖြင့်အစပျိုးသည်။ ဒါက corpora cavernosa အတွက်ဖိအားသောအသွေး entrapment နှင့်တကွ, လိုဏ်ဂူ sinusoids နှင့်သွေးပြန်ကြောထဲကအ-စီးဆင်းမှု၏ကန့်သတ်၏အသှေးကိုဖြည့်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါ parasympathetic အာရုံကြောကနေနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်၏လွှတ်ပေးရေးအပန်းဖြေမှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ, နှင့်စိုက်ထူစဉ်အတွင်းလိင်တံသွေးဝင်ရောက်လာခဲ့သည်အတွက်တိုးလည်းနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်နှင့်စိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပံ့ပိုးသည်အခြား endothelium-မှီခို vasodilators လွှတ်ပေးရန်ဖို့ endothelial ဆဲလ်အလွှာလှုံ့ဆော် 25-27.
အဆိုပါ CNS အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမတူဘဲမှာအရံ erectile တစ်ရှူးအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလျော့နည်းရှင်းပါတယ်။ dopamine ၏ပြုတ်ရည်ကြောင်အတွက်စိုက်ထူ induces 28dopamine D ကို၎င်း, တစ်ဦးရန်1 receptors, SCH23390, သိသိသာသာကြွက်များအတွင်းလိုဏ်ဂူအာရုံကြောကိုနှိုးဆွခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် intracavernosal ဖိအားအတွက်တိုးဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ် 29။ Dopamine: D1 နဲ့ D2 receptors ကြွက်များနှင့်လူထဲက erectile တစ်ရှူးများတွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ် 30, 31Corpus cavernosum ကနေအထီးကျန်ချောမွေ့ကြွက်သားဆဲလ်များနှင့် patch ကိုညှပ် dopamine နဲ့ dopaminergic agonists ကြီးမားသော-conduction ကယ်လစီယမ်-activated ပိုတက်စီယမ် channel များကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်အပန်းဖြေသွေးဆောင်ကြောင်းအကြံပြု 32။ အဆိုပါ dopamine ပို့ဆောင်ရေးဟူသောအသုံးအနှုနျးအဘို့သက်သေအထောက်အထားစနစ်တကျသွေးလွှတ်ကြောများ၏ endothelial ဆဲလ်ထဲမှာရှိပါတယ် 33, 34ဒါပေမဲ့ဒီနေဆဲ erectile တစ်ရှူး endothelial ဆဲလ်တွေအတွက်ဆန်းစစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ dopamine နေသော်လည်းစာနာအာရုံကြောဆိပ်ကမ်းဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီး erectile တစ်ရှူးအတွက် dopamine ၏အရင်းအမြစ်စိုက်ထူမှာပါဝင်နေတဲ့ dopamine အဆိုပါ erectile တစ်ရှူးအတွက် endothelium သို့မဟုတ်အခြားအဆောက်အဦများထံမှဆင်းသက်လာခြင်းရှိမရှိကိုလည်းရှင်းလင်းခံရဖို့ကျန်ရှိနေဆဲနှင့်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, CNS နှင့်ကျောရိုး၏ lumbosacral အစိတ်အပိုင်းအတွက် dopaminergic လမ်းကြောင်းဟာ erectile function ကိုပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်ကို၎င်း, erectile တစ်ရှူးတစ် dopaminergic လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ကောင်းလည်းမရှိ။ ဒါက dopaminergic လမ်းကြောင်း၏မော်ဂျူသုံးခုစလုံးအဆင့်ဆင့်သို့မဟုတ်မှသာရံ dopaminergic လမ်းကြောင်းကြိုးစားခဲ့နိုင်ပါတယ်ပစ်မှတ်ထား hydrophilic မူးယစ်ဆေးဝါးများမှာရည်ရွယ်ထားနိုင်သည်ကိုအကြံပြုထားသည်။
Erectile ရာထူးအမည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် Dopaminergic Pathways ၏ Pharmacological Modulation
Dopamine အဲဒီ receptor agonists
စိုက်ထူသွေးဆောင်တွေ့ရှိ dopaminergic အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူပထမဦးဆုံးမူးယစ်ဆေး, apomorphine အထွေထွေ dopaminergic အဲဒီ receptor agonist ခဲ့သည် 12နှင့်လိုလားသူ erectile ဆိုးကျိုးများနှင့်ပတ်သက်သောအထောက်အထားအများစုကို dopaminergic အဲဒီ receptor agonists အဘို့အခွင့်ရရှိထားသည်ဟုသိရသည်။ dopamine receptors ငါးခုအဓိကမျိုးကွဲ: D ရှိပါတယ်1-D5 : D အဖြစ်အုပ်စုဖွဲ့1-ကြိုက်ခဲ့1, D ကို5) နှင့် D ကို2-ကြိုက်ခဲ့2, D ကို3 နဲ့ D4) receptors ။ binding ဆှဖှေဲ့စားပွဲပေါ်မှာအတွက် dopamine အဲဒီ receptor agonists များအတွက်ဖော်ပြထားကြသည် 1, ထိုသေချာပေါက်သက်ဆိုင်ရာ receptors ပေါ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အလုပ်လုပ်တဲ့သက်ရောက်မှုကိုက်ညီတဲ့ပါဘူးပေမယ့်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးများအချို့သည်မြင့်သောပြင်းအားဟာ endogenous ligand dopamine ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုစေခြင်းငှါအဓိပ်ပာယျကတော့ receptors မှာသာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonists ဖြစ်ကြသည်။ ထိုမှတပါး, dopamine receptors ၏ homo- နှင့် heterodimers ဖော်ပြထားခဲ့ကြနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ရာ agonists ၏ဆှဖှေဲ့နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံးကိုပြောင်းလဲစေခြင်းငှါ 35.
စားပွဲတင် 1 ။ ဆှဖှေဲ့ (-log Ki) dopamine: D အဘို့အ dopamine အဲဒီ receptor agonists ၏1-5 receptors
D1 GαS စခန်း↑, Ca2+↑
D2 Gi/Go စခန်း↓ K ကို+↑
D3 Gi/Go စခန်း↓ K ကို+↑
D4 Gi/Go စခန်း↓ K ကို+↑
D5 GαS စခန်း↑
Dopamine 4.3-5.2 4.7-7.2 6.4-7.3 7.6 6.6
Apomorphine 5.3-6.2 7.6 (PA ဆိုပြီး) 6.1-7.6 8.4 (PA ဆိုပြီး) 6.4-7.8 (PA ဆိုပြီး)
Bromocriptine 6.2 (PA ဆိုပြီး) 7.3 7.1 (PA ဆိုပြီး) - 6.3 (PA ဆိုပြီး)
Fenoldopam 6.5-7.9 - - 6.5 -
Cabergoline 6.7 9.0-9.2 (PA ဆိုပြီး) 9.1 7.3 (PA ဆိုပြီး) 7.7
Pergolide 5.9-6.5 7.5-7.6 8.3 7.2 6.0-7.5
Ropinirole - 8.1 7.7 - -
Lisuride 7.2 9.2-9.5 9.3 (PA ဆိုပြီး) 8.3 -
Quinpirole - 4.9-7.7 6.4-8.0 7.5 -
Quinelorane - 5.5-5.7 7.2-7.4 - -
PD168,077 - - - 8.8 (PA ဆိုပြီး) -
ABT 724 - <5 - 7.2 (PA ဆိုပြီး) -
ABT 670 - <5 - 5.8 (PA ဆိုပြီး) -
စားပွဲပေါ်မှာ database တွင်ရရှိနိုင်လူ့ dopamine receptors မှ binding အပေါ်သတင်းအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံပြီးတည်ဆောက်ထားသည်: www.guidetopharmacology.org အဆိုပါဆေးဝါးဗေဒအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမဂ္ဂ (IUPHAR) နှင့်မူလတိုင်းတာပေးညွှန်းဆိုလည်းဝင်ရောက်စေနိုင်သည်ရှိရာဗြိတိန် Pharmacological လူ့အဖွဲ့အစည်းကပိုင်ဆိုင်။ အကွာအဝေးပေးသောအခါကအဲဒီ receptor မျိုးကွဲများ၏ subpopulations မှစည်းနှောင်ထင်ဟပ်။ အဆိုပါ, ABT 724 နှင့်စပ်လျဉ်း Ki တန်ဖိုးများကိုမူလအလုပ်ကနေများမှာ 57။ အဆိုပါ agonists အချို့သည် receptors အပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonists (PA ဆိုပြီး) ဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာပါပြီ။ ဂျီပရိုတိန်းနှင့် signal ကို transduction လမ်းကြောင်းမှသာဂန္ထဝင်လမ်းကြောင်းကိုဖုံးလွှမ်း။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များအတွက်, စာသားကြည့်ပါကျေးဇူးပြုပြီး 35.
Dopamine receptors ဘယ်မှာ: D, G ပရိုတိန်း-မှီခိုဆယ်လူလာလမ်းကြောင်းမှတဆင့်အချက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြတယ်1-like receptors (ဃ1 နဲ့ D5Gαမှ) စုံတွဲS ပရိုတိန်းနှင့် activation အပေါ် adenylate cyclase လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် D ကိုစဉ်သိသိ amp တိုးမြှင့်2-like receptors (ဃ2, D ကို3 နဲ့ D4Gαမှ) စုံတွဲi/ Gα0 ပရိုတိန်းနှင့်လျှော့ချသိသိ amp အဆင့်ဆင့်မှဦးဆောင် adenylate cyclase တားစီး 35, 36။ သို့သော်မကြာသေးမီက, dopamine: D1receptors လည်း inositol triphosphate အားဖြင့် phospholipase C နဲ့ intracellular ကယ်လစီယမ်၏လွှတ်ရာကို Activation အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ဖြစ်ကောင်းGαqမှတဆင့် intracellular ကယ်လစီယမ်အတွက်တိုးမြှင့်ဖို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးမှတွေ့ပါပြီ -like (အိုင်ပီ3) 35နှင့်သော dopamine D ကိုရှင်းပြပါစေခြင်းငှါ1 ကယ်လစီယမ်အတွက်အဲဒီ receptor-သွေးဆောင်တိုးနှင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ဖွဲ့စည်းခြင်း (သင်္ဘောသဖန်း။ 1) ။ ထို့အပြင်: D2-like receptors နှင့် / သို့မဟုတ် dopamine receptors ၏ heterodimers နှစ်ဦးစလုံးGβγနှင့် arrestin မှတဆင့်နဲ့အခြားအချက်ပြ transduction လမ်းကြောင်းမှစုံတွဲတစ်တွဲမှဖော်ပြထားခဲ့ကြ 35။ ထို့ကြောင့် agonists တချို့၏ဘက်လိုက်ရောကျသောကြောင့်, ပုံတူညီစည်းနှောင်ဆှဖှေဲ့နှင့်အတူ agonists ၏အလုပ်လုပ်တဲ့သက်ရောက်မှုသိသိသာသာကွာခြားလိမ့်မည်။
apomorphine နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုတခုတခုအပေါ်မှာကျယ်ပြန့်စာပေရှိပါသည် 1, 37။ အကျဉ်းခုနှစ်, apomorphine (အစီရင်ခံဖော်ပြထားအဲဒီ receptor စည်းနှောင်ဆှဖှေဲ့နှင့်အတူအထွေထွေ dopamine အဲဒီ receptor agonist ဖြစ်ပါသည်Ki) dopamine receptors များအတွက်အောက်ပါအတိုင်း: D:1-ကြိုက်ခဲ့1 (101 nm), D ကို5 (10 nm)] နှင့်: D2-ကြိုက်ခဲ့2 (32 nm), D ကို3 (26 nm) နှင့် D ကို4 (၂.၆ nM)] 38 (စားပွဲ 1) ။ အဆိုပါ supraoptic နျူကလိယ (သား), MPOA, နှင့် hypothalamus ၏ PVN ခုနှစ်, oxytocinergic အာရုံခံ D ကိုဖော်ပြ2, D ကို3 နဲ့ D4 receptors နှင့် apomorphine: D များ၏ activation မှတဆင့်စိုက်ထူသွေးဆောင်ဖို့အကြံပြုခဲ့သည်2အဆိုပါ PVN အတွက် receptors -like 39။ ကျောရိုး dopamine ၏ activation: D2 အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း receptors လည်း apomorphine ၏လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါ 23။ Matsumoto et al. 40 : D အထီးကျန်ကြွက် erectile တစ်ရှူး apomorphine-သွေးဆောင်အပန်းဖြေအတွက် dopamine ပါဝင်ပတ်သက်နေပုံကိုတွေ့ရှိခဲ့1 နဲ့ D2 receptors ပေမယ့်စာရေးဆရာ '' apomorphine ၏သက်ဆိုင်ရာစနစ်တကျဆေးများမှာ, ဝင်း၏အရံသက်ရောက်မှုကြွက်အတွက်၎င်း၏လိုလားသူ erectile သက်ရောက်မှုအထောက်အကူပြုရန်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်း '' ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်အလယ်ပိုင်း: D ၏အဓိကအားဖြင့်တစ်ဦးပါဝင်ပတ်သက်မှု, အစညျးပရိုဖိုင်းနဲ့ erectile function ကိုထောက်ခံကြောင်း၏လေ့လာမှုများ2apomorphine ၏လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် receptors -like ။
Apomorphine ကိုပါကင်ဆန်ရောဂါကုသရန်အတွက်တီထွင်ခဲ့သော်လည်းအဓိကအားနည်းချက်မှာပျို့အန်ခြင်းနှင့်အန်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် apomorphine ကိုဘာသာဗေဒအရစီမံခန့်ခွဲခြင်းအားဖြင့်သည်းခံနိုင်စွမ်းရှိသောကုထုံးပြတင်းပေါက်တစ်ခုအားရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှလေ့လာတွေ့ရှိရသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ (အနီ၊ ပျို့ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ မူးဝြေခင်း၊ အမြင်အာရုံမှုန်ဝါးခြင်း၊ apomorphine အုပ်ချုပ်ရေး 41။ ယောက်ျား၏ 74% အတွက်အလယ်အလတ် ‐ မှ ‐ ပြင်းထန်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူ ED အပေါ် apomorphine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်အဆင့် III ကိုလေ့လာမှုမှာ apomorphine-သွေးဆောင်စိုက်ထူ 10-25 မိနစ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်။ ထို့အပြင်ဒီလေ့လာမှုမှာ apomorphine 54.4% အတွက်လိင်ဆက်ဆံရန်သင့်လျော်သောစိုက်ထူဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြခဲ့ နှင့် ယင်းရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စု 33.8% 42။ သို့သော်ယေဘုယျအလေ့အကျင့်အတွက် ED နှင့်အတူတင်ပြ 11,185 ယောက်ျားတစ် Post-စျေးကွက်စူးစမ်းဆောင်များတွင်လေ့လာမှုအတွက် apomorphine နှင့်အတူကုသမှုရပ်တန့်များအတွက်အဓိကအကြောင်းပြချက်မူးယစ်ဆေးလူနာများ၏ 64.7% အတွက်ထိရောက်မှုခဲ့ပါတယ် 43.
ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, apomorphine အလားအလာဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများဆက်တိုက်ရှိပါတယ်။ Post-စျေးကွက်လေ့လာမှုမှာ apomorphine ၏ sublingual ရေးဆွဲရေးမှအများဆုံးမကြာခဏဘေးထွက်ဆိုးကျိုးခေါင်းကိုက်ခဲ့သည် 43နှင့် hypotension နှင့်ဟနေခြင်းဆင်တူ, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု dopamine receptors အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည်။ သို့သော် apomorphine လည်းနာကျင်မှုအာရုံခံစားမှု, ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ပျို့ချင်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ယာယီအဲဒီ receptor အလားအလာ ankyrin 1 (TRPA1) ချန်နယ်များကိုသက်ဝင်စေဖို့အနိမ့်ပြင်းအားမှာပြထားပြီး 44, ပစ်မှတ် apomorphine များ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှပံ့ပိုးမှုများ binding ကြောင်းချွတ်အကြံပြုခြင်း။
ရွေးချယ် dopamine: D1 အဲဒီ receptor agonists နှင့် erectile function ကို
PVN အတွက် microinjected apomorphine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုများမှာတော့လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှု dopamine: D အားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားခဲ့ပါတယ်1 အဲဒီ receptor ရန်, SCH 23390 နှင့် dopamine: D2 အဲဒီ receptor ရန်, haloperidol နှင့် (-) - sulpiride 12။ Fenoldopam D ကိုအဓိကအား dopamine မှာ benzazepine ဆင်းသက်လာပြီးရွေးချယ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist ဖြစ်ပါသည်1 receptors (စားပွဲ 1) နှင့် dopamine: D အဘို့အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာဆှဖှေဲ့ရှိပါတယ်2 receptors, ဒါပေမယ့်αမှအလယ်အလတ်ဆှဖှေဲ့နှင့်အတူခညျြနှောငျ2-adrenoceptors ။ ဒါဟာသွေးတိုးရောဂါအကျပ်အတည်းနှင့် / သို့မဟုတ်ရံသွေးကြောရောဂါကုသမှုအတွက်အဓိကအားထားတဲ့ antihypertensive မူးယစ်ဆေးအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ fenoldopam ၏စနစ်ပြုတ်ရည်ထိုး-ရသည် anaesthetized ကြွက်များအတွင်းလိုဏ်ဂူအာရုံကြောများ၏ distal စုတစု submaximal လျှပ်စစ်ဆွခြင်းဖြင့်ရူးနှမ်း intracavernosal ဖိအား (erectile function ကိုတစ်ဦးအတိုင်းအရှည်) အတွက်တိုး potentiated 45။ ပေမဲ့ စသည်တို့ဖြစ်သည် လေ့လာမှုများ fenoldopam အားဖြင့်သွေးဆောင် Corpus cavernosum ၏ပနျးဖွလေ့နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်တစ်ခုပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်အခြား dopamine D ကိုပြသ1 အဲဒီ receptor ရွေးချယ် agonist A-68930 31, 45, vivo အတွက် fenoldopam ၏လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှု fenoldopam ၏တိုက်ရိုက်လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကွောငျးအကြံပြုခြင်း NOS တစ်ခု inhibitor ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ သို့သော်ဤတွေ့ရှိချက်သည်အခြားလေ့လာမှုများကအတည်ပြုခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်လည်းဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ်စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲ fenoldopam ၏နဂိုအတိုင်းသတိတိရိစ္ဆာန်များနှင့် / သို့မဟုတ်လူကိုစိုက်ထူဖို့ဦးဆောင်ရှိမရှိရှင်းလင်းဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ပါလိမ့်မယ်။
ရွေးချယ် dopamine: D2 နဲ့ D3 အဲဒီ receptor agonists နှင့် erectile function ကို
apomorphine, dopamine D ကိုဆင်တူ2/D3 agonists, bromocriptine နှင့် quinelorane, အလိုအလျောက်စိုက်ထူသွေးဆောင်ခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင် erectile ဖြစ်ရပ်များများ၏အရေအတွက်ကိုတိုး 46-48, ဖြစ်ကောင်းကြွက်များ၏ PVN အတွက် oxytocinergic အာရုံခံ၏ activation အားဖြင့် 47။ Dopamine: D2 နဲ့ D3 receptors ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ 50% homology ရှိသည်, က dopamine: D အဘို့အရွေးချယ်ဒြပ်ပေါင်းများကိုရရှိရန်ခက်ခဲသက်သေပြခဲ့သည်3, D ကိုဆန့်ကျင်အဖြစ်2, receptors 49။ Dopamine: D2 ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်ဆက်နွယ်သောလှုပ်ရှားမှုမမှန်မှုများကို dopamine D ဖြင့်ကုသပေးသော receptors များသည်2 dopamine ၏မော်ဂျူစဉ် agonists, D ကို3 receptors များသည်ပါကင်ဆန်ရောဂါ၊ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့် schizophrenia တို့ကိုကုသရန်စိတ်ဝင်စားသည် 49, 50။ ဤရောဂါ၏ကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုဥပမာ bromocriptine, cabergoline, pergolide, ropinirole နှင့် rotigotine အဘို့, dopamine agonists အတော်ကြာ dopamine: D တို2 အဲဒီ receptor agonist သက်ရောက်မှု (စားပွဲ 1), သူတို့ကလည်းတိုးမြှင့် libido (hypersexuality) နဲ့ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။ လူတို့တွင် priapism အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောကြာမြင့်စွာစိုက်ထူခြင်း (> ၄ နာရီ) cabergoline နှင့် rotigotine များအတွက်ဖြစ်ရပ်များတွင်ဖော်ပြထားသည်။ 51, 52 နှင့် erectile function ကိုအဘို့အကြီးကျယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် dopamine: D အပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်2 receptors, cabergoline နှင့် rotigotine နှစ်ဦးစလုံးချည်နှောင်ဖို့နဲ့αဆန့်ကျင်ဘက်ပြု1-adrenoceptors နှင့်α၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း1-adrenoceptors priapism တစ်မကြာခဏအကြောင်းအရင်း 53.
dopamine: D ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်လေ့လာမှုတွေအရေအတွက်2 နဲ့ D3 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကုသမှုများအတွက် agonists ကန့်သတ်သည်။ ပွင့်လင်းသောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်လူနာ ၁၃ ဦး သည်စိတ်ကျရောဂါကုသမှုဖြင့်စတင်ကုသပြီးနောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရီဇိုးနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံစကေးနှင့်လက်တွေ့တိုးတက်မှု၏လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများအရတိုင်းတာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုသည်ကုသမှုစတင်ပြီးနောက် ၃ ပတ်အကြာတွင်ထိုအကြေးခွံနှစ်ခုလုံးအပေါ်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ropinirole အတူ 54။ အဆုံးစွန်သောလေ့လာမှုတွင် ropinirole (၃-၄ မီလီဂရမ် / တစ်နေ့) ဆေးများသည်ပါကင်ဆန်ရောဂါခံစားနေရသောလူများတွင်လိင်စိတ်မတည့်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွန်းအားများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ဆေးများ (တစ်နေ့လျှင် ၂၀-၂၅ မီလီဂရမ်) ထက်သိသိသာသာနိမ့်ကျသည်။ 10, 54။ dopamine များအတွက်ရွေးချယ် agonists အားဖြင့်ရောထွေးမူရင်း ED ကုသမှုအတွက်ထို့ကြောင့်အလားအလာ: D2 သို့မဟုတ်: D3 receptors အပြုအမူနှင့်သွေးဖိအားအဖြစ်အလားအလာပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအပေါ်သက်ရောက်မှုအကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်ဖြစ်သော်လည်းစူးစမ်းခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့အပွငျကလက္ခဏာ-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသဤ agonists ၏အနိမ့်ဆေးများကို အသုံးပြု. ကျပန်း, ကို double-မျက်စိကန်းသောသင်အံရန်သက်ဆိုင်ရာလိမ့်မည်။
ရွေးချယ် dopamine: D4 အဲဒီ receptor agonists နှင့် erectile function ကို
တစ်ဦးကရွေးချယ် dopamine: D4 အဆိုပါ PVN သို့ microinjected တဲ့အခါမှာအဲဒီ receptor agonist, PD168077, ကြွက်များတွင်စိုက်ထူသွေးဆောင်ရှာတွေ့ခဲ့သည် 47, 55, 56။ သို့သော် PVN, PD168077 အတွက် oxytocinergic အာရုံခံအတွက် Fos များအတွက် staining အသုံးပြုပုံ quinelorane မှမတူဘဲဤအာရုံခံမျက်နှာပြင်ကိုသက်ဝင်စေဖို့မတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမှတပါး, PD168077 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအခြေအနေတွင်မူတည်ရှိ၏ ဥပမာအားဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုလက်ခံအမျိုးသမီးကြွက်များ၏ရှေ့မှောက်၌လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်နှင့် D ကို dopamine ပါဝင်နိုင်4 အဆိုပါ magnocellular oxytocin စနစ်၏ receptor activation 47.
Apomorphine dopamine: D အဘို့အမြင့်မားသောဆှဖှေဲ့ရှိပါတယ်4 receptors ဒါပေမယ့်လည်း dopamine D ကိုမှခညျြနှောငျထားဘူး2 မြင့်မားသောဆှဖှေဲ့ (စားပွဲနှင့်အတူ receptors 1) ။ : D ကကမကထပြုခဲ့ဆေးထိုး-ကန့်သတ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုရှောင်ကြဉ်ရန်2 ဥပမာအားဖြင့်ပျို့နှင့် emesis များအတွက် receptors, dopamine: D4 အဲဒီ receptor agonists, ABT 724 နှင့် ABT 670, ED ၏ကုသမှုများအတွက်တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ လွတ်လပ်စွာကြွက်ရွေ့လျားခုနှစ်, intracavernosal ဖိအားတိုးတိုင်းတာနှင့် ABT 724 အလိုအလျောက်စိုက်ထူ၏ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပြင်းအားတိုးလာ, ဤတုံ့ပြန်မှုပိုကြီးပြီး PDE5i ၏ရှေ့တော်၌ကြာကြာကြာချိန်ဖြင့်ပြီးကြ၏, sildenafil အရေပြားအောက်ဆုံးထိုး-ရသည်အုပ်ချုပ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည် 57။ ပြပေးအတွက် injection, ပျို့ခြင်းနှင့် emesis များအတွက် Pre-လက်တွေ့မော်ဒယ်အဖြစ်တစ်ဦးရွေးချယ် dopamine: D မတူဘဲအတွက်ထင်ရှား2 အစားအမြင့်ဆုံးကြိမ်အတွက်အဲဒီ receptor agonist, အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ-95666E, ABT 724 သည်ဤသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ 57။ နောက်ထပ် dopamine: D4 ပိုကောင်းတဲ့ပါးစပ် bioavailability နှင့်အတူအဲဒီ receptor agonist, ABT 670, တီထွင်, ဒါပေမယ့်သူက D: dopamine မှသိသိသာသာလျော့နည်းဆှဖှေဲ့ရှိပါတယ်ခဲ့သည်4 ABT 724 (စားပွဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ receptors 1, 58) ။ အရေပြားအောက်ဆုံးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရ, ABT 670-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူ၏အဖြစ်အပျက်တွေ apomorphine ၏တူညီသောထိုးနှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာသည်ထက်လျော့နည်းခဲ့ကြ 58။ ဤရွေ့ကားဒေတာဖြစ်ကောင်းလည်းသူတို့ dopamine D ကိုမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonists သောလေ့လာတွေ့ရှိချက်များကရှင်းပြခဲ့သည် ABT 724 နှင့် ABT 670 လျော့နည်းအစွမ်းထက်ဖြစ်ကြပြီး apomorphine နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါလျော့နည်းထိရောက်မှုရှိသည်သောလေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူသဘောတူ4 receptors 57, 58။ ဤအ dopamine: D ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်4 agonists, ABT 724 နှင့် ABT 670, အသီးသီးအဆင့်ငါနှင့်အဆင့် II ကိုစမ်းသပ်မှုတွေရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, ပုံလျော့နည်းဆိုးရွားသောရှိနေသော်လည်း apomorphine, အာနိသင်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ ABT 724 နှင့် ABT 670 နှင့်အတူဆိုးကျိုးများနိမ့်ခဲ့ကြသည်။ ဒီနေရာမှာလည်းတွေ့ရှိချက် dopamine: D ၏ erectile function ကိုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင်း4 receptors ရလဒ်တစ်ခုအခန်းကဏ္ဍကစားနိုင်ပါတယ်အခြေအနေတွင်မူတည်သည်။
ရွေးချယ် dopamine: D5 အဲဒီ receptor agonists နှင့် erectile function ကို
dopamine: D ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များ5 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအပေါ်အဲဒီ receptor agonists ကန့်သတ်သည်။ အများအပြားကလေ့လာမှုများ dopamine: D ၏စကားရပ်၏ဒေသများကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ5 receptors ။ အဆိုပါ dopamine: D5 အဲဒီ receptor အဆိုပါ hypothalamus နှင့်ကြွက်နှင့်လူ့ဖြစ်လျက်ရှိ၏ဦးနှောက်ထဲတွင် thalamus ၏ parafascicular နျူကလိယအတွင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ dopamine: D များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစကားရပ်ဒေသများ5 receptors နှင့် အခြားအ dopamine receptors ကြောင်း dopamine D ကိုအကြံပြု5 receptors dopaminergic function ကို၏စည်းမျဉ်းများနှင့်ပေါင်းစပ်အဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ 59။ အဆိုပါ dopamine: D5 receptors ကိုလည်းဥပမာ substantia nigra-ပိုဒျ compacta အ, striatum, ဦးနှောက် cortex, နျူကလိယ accumbens နှင့် olfactory tubercle အဘို့, အခြားဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ် 60။ မကြာသေးမီကအစီရင်ခံစာ dopamine: D ၏နောက်ကောက်ပြသ5 receptors အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception မှေးမှိန်နှင့်ယောက်ျားပေါင်းအတွက် Pre-ejaculatory penile intromission ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုသြဇာလွှမ်းမိုး 61။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိုး, ED နှင့် ejaculatory ပြဿနာများအတွက်လျှော့ချရေး antipsychotics နှင့်အတူလူနာအတွက်ပစ္စုပ္ပန်များမှာ 62။ ထိုကွောငျ့, တစ်ဦး dopamine: D5 အဲဒီ receptor agonist လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ဖြစ်ကောင်းဒီလိုလူနာအတွက်လိင်စိတ်တစ်ခုဖြည့်စွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, dopamine receptors ၏ agonist ဆွလိုလားသူ erectile သက်ရောက်မှုရရှိရန်မျှော်တစ်လမ်းဖြစ်တယ်, နှစ်ဦးစလုံးအလယ်ပိုင်းနှင့်အရံ dopamine receptors ED ၏ကုသမှုများအတွက်အလားအလာပစ်မှတ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာ D ကိုပု erectile သက်ရောက်မှု dopamine ၏ activation အပေါ်မှီခိုနေကြပုံ2, D ကို3, D ကို4 CNS နှင့် dopamine: D အပေါ်အဓိကအားဖြင့်မူတည်သည့်အစွန်အဖျားမှာရှိတဲ့ receptors1 Corpus cavernosum အတွက်အဲဒီ receptor activation (သင်္ဘောသဖန်း။ 1) ။ apomorphine ED ၏ကုသမှုများအတွက်အလားအလာမူးယစ်ဆေးအဖြစ်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းခဲ့သော်လည်း, ကပထမမျိုးဆက်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ လာမယ့်မျိုးဆက်များအတွက်လိုအပ်ချက်မူးယစ်ဆေးကိုယ်စားလှယ်လောင်းဥပမာ D: မှာအနည်းဆုံးတူညီထိရောက်မှုရှိသည်ဖြစ်ရလိမ့်မည်3/D4 receptors နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ apomorphine ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုရှောင်ကြဉ်။
Dopamine အဲဒီ receptor ရန်နှင့် erectile function ကို
Antipsychotics နှင့် erectile function ကို
အများစုမှာ antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများ D ကိုမှခညျြနှောငျနှင့် dopamine မှာ dopamine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန့်ကျင်ဘက်ပြု2 ဥပမာအား haloperidol များအတွက် receptors ။ အသစ်များ Anti-psychotic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အနိမ့်ဖြစ်ပွားမှုရှိသည်ဖို့ပေါ်လာနေချိန်မှာထိုကွောငျ့, အဟောင်းတွေ Anti-psychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမကြာခဏ, ထိုလူနာ 30-60% အတွက်လျော့နည်းသွားစိုက်ထူခြင်းနှင့် anorgasmia နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် 5, 62။ aripiprazole နှင့် ziprasidone အပေါ်မလုံလောက်ဒေတာရှိပါတယ်နေစဉ်အသစ်များ Anti-psychotic များထဲတွင် risperidone, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အမြင့်ဆုံးနှုန်းကိုရှိသည်ဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။ aripiprazole ဖို့ atypical antipsychotics, risperidone, amisulpride နှင့် olanzapine ထံမှဆေးကုသမှု switching တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူးလေ့လာမှုပုံသေးငယ်တဲ့လူနာလူဦးရေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက် 63ဒါပေမဲ့ဒီလူနာပိုကြီးတဲ့ဂဏန်းနှင့်အတူလေ့လာမှုများကအတည်ပြုခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါဟာမူးယစ်ဆေးအကျိုးသက်ရောက်မှုအနေဖြင့်ရောဂါခွဲခြားရန်နှင့် psychotic နာမကျန်းနှင့်အတူလူနာထံမှယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် antipsychotic ကုသမှုမသာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု erectile function ကိုသာသက်ရောက်သည်, ဒါပေမယ့်လည်းလိင်စိတ်လျော့နည်းစေ, retrograde သုတ်ရည်လွှတ်စေပြီးလိင်စိတ်နိုးထနှင့်ယေဘုယျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုလျော့ကျစေပါတယ်။ မကြာသေးမီက Cochrane ပြန်လည်သုံးသပ် antipsychotics နှင့်အတူကုသမှုလူနာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဆန့်ကျင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေဆန်းစစ်နှင့် olanzapine မှ switching ယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်နှစ်ဦးစလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေခြင်းငှါအကြံပြု 64။ သို့သော်ဤရလဒ်များကိုသေးငယ်တဲ့ Open-တံဆိပ်ရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်အခြေခံပြီး, အခြားသောဖြစ်နိုင်ခြေ sildenafil နှင့်အတူ schizophrenia နဲ့ ED နှင့်အတူလူနာကုသရန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်အထောက်အထားကျဲဖြစ်ပါတယ်ခဲ့ကြသည် 64.
Buspirone SSRIs နှင့်နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုနည်းချစ်ခင်နဲ့ anxiolytic မူးယစ်ဆေးသည်နှင့်ပင် SSRI ကုသမှုနှင့်အတူဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု reverse စေခြင်းငှါ 65, 66။ Buspirone 5-hydroxytryptamine အမျိုးအစား 1A အပေါ်တစ်ဦးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist ဖြစ်ပါတယ် (5-HT1A receptors), ဒါပေမယ့် buspirone နှင့် dopamine: D ဖို့အဓိက 5-နှင့် 6-hydroxylmetabolites ချည်နှောင်နှစ်ဦးစလုံး3 နဲ့ D4 5-HT ရန်စည်းနှောင်မှနှိုင်းယှဉ်ဆှဖှေဲ့နှင့်အတူ receptors1A receptors, သူတို့နှစ်ဦးစလုံး dopamine D ကိုမှာရန်အဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်3 နဲ့ D4 receptors 67။ 5-HT ၏ activation1A ဒီအဲဒီ receptor ၏ရန်အရေပြားအောက်ဆုံးအုပ်ချုပ် apomorphine နှင့် fluoxetine ၏စူးရှသောလိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်နေချိန်တွင် agonists အားဖြင့် receptors ဥပမာ 8-Oh-DPAT အဘို့, ကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ် 68။ ထို့ကြောင့်, erectile function ကို၏လျော့နည်းချစ်ခင် buspirone နှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိ နှင့် SSRI ဖြစ်နိုင် 5-HT အပေါ်ရန်အဖြစ် buspirone သရုပ်ဆောင်ဖို့ ascribed နိုင်ပါသည်1A receptors, ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများအပြည့်အဝ buspirone ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအခြေခံသည့်ယန္တရားကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည် နှင့် erectile function ကိုအပေါ် SSRI ။
အဆိုပါ Synaptic dopamine အကြောင်းအရာတိုးပွားလာမူးယစ်ဆေးဝါး
အဆိုပါ Synaptic dopamine အကြောင်းအရာ dopamine ၏တိုးမြှင့်ဖြန့်ချိခြင်းဖြင့်, ထို dopamine reuptake Transporter (DAT) ၏တားစီးအသုံးပြုပုံသို့မဟုတ် catechol- ၏တားစီးနေဖြင့် dopamine ပျက်ပြားပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်းတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်O-methyltransferase (COMT) သို့မဟုတ် monoamine oxidase (Mao) B ကို inhibitors ရိုက်ထည့်ပါ။
အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်မူးယစ်ဆေး amantadine အာရုံကြောဆိပ်ကမ်းကနေ dopamine များလွှတ်ပေးရန်လှုံ့ဆော်နှင့် presynaptic အာရုံခံဆဲလျအတွက် dopamine ၏ reuptake ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မှာအားနည်းရန်ဖြစ်ပါသည် N-methyl-d‐aspartate (NMDA) အဲဒီ receptors ။ လူ၌ ၁၀-၁၅ နာရီခန့်ရှည်သောသက်တမ်းဝက်ရှိသော်ငြားလည်းမူးယစ်ဆေးဝါးကိုသည်းခံနိုင်မှုတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှသက်ရောက်မှုများကိုလည်းတိုတောင်းနိုင်သည်။ အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည်စိတ်ကျဆေးများကိုကုသသည့်နေရာများဥပမာဥပမာ fluoxetine နှင့် paroxetine တွင် amantadine နှင့်အတူကုသမှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပြောင်းလဲစေကြောင်းအစီရင်ခံတင်ပြထားသည် (anorgasm, ED) 10, 69။ သို့သော်ကျပန်းစမ်းသပ်မှုတွေ amantadine တကယ်တော့စိတ်မကျဆေး Antidepressants နဲ့ကုသသောလူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ဘို့အသုံးဝင်သည်ရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ခံတွင်းစိတ်ကြွဆေးအာရုံကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါနှင့်လည်းအဖြစ်အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဖက်တမင်းဆေးပြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုနှိုးဆှအစီရင်ခံထားသည် 70။ ဖက်တမင်းဆေးပြား dopamine ၏တိုးချဲ့ဖြန့်ချိသူနဲ့ဆက်စပ်, ဒါပေမယ့်လည်း penile သွေးလွှတ်ကြောများနှင့် Corpus cavernosum ၏ကျပ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမည်သည့်စာနာအာရုံကြောကနေ noradrenaline ၏လွှတ်ပေးရန်တိုးပွါး 71။ ထို့ကြောင့်, စိတ်ကြွဆေးအလွဲသုံးစားမှုနှင့် / သို့မဟုတ်နာတာရှည်အသုံးပြုမှုကိုမကြာခဏ ED ဖို့လည်းကြွက်များအကြောင်းပြောရင်ရနိုင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုဦးဆောင်လမ်းပြ 72။ PDE5i ဥပမာ tadalafil အဘို့, နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးနဲ့ကုသကြွက်များတွင် erectile function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန် 72, ဤတစ် PDE5i ၏စားသုံးမှုနှင့်အတူစိတ်ကြွဆေး / စိတ်ကြွဆေးပေါင်းစပ်ပြီးအဆိုပါအပန်းဖြေအသုံးပြုမှုကိုရှင်းပြပါစေခြင်းငှါ 73, 74.
Clavulanic acid ကို
Clavulanic acid ကိုတစ်ဦး beta-lactamase inhibitor သည်နှင့်မကြာခဏဘက်တီးရီးယား beta-lactamase အသုံးပြုပုံဥပမာအား amoxicillin အဘို့, penicillin ၏ပျက်ပြားကာကွယ်တားဆီးဖို့ penicillin နှင့်အတူပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်။ Clavulanic acid ကိုနှုတ်တက်ကြွစွာနှင့်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပြီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 25% သည်လူအတွက် cerebrospinal fluid ကိုရောက်ရှိ။ clavulanic အက်ဆစ်နှင့်အတူစမ်းသပ် Non-လူ့မျောက်ဝံများလိင်စိတ်နိုးထတိုးမြှင့်ဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည် 75ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကို ၅၀ μg estradiol benzoate ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ကြွက်များကိုလိင်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအဆိပ်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည့်ကြွက်များကိုစမ်းသပ်ပြီးစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာ intromissions နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုအရေအတွက်ကိုတိုင်းတာခဲ့သည်။ 76။ Clavulanic အက်ဆစ်၏ထက်ဝက်ဘဝသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁ နာရီဖြစ်သည် 77, ဒါပေမယ့်အများဆုံးအသေးစားစူးရှသောလိုလားသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအုပ်ချုပ်အမြင့်ဆုံးထိုးမှာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ၇ ရက်ကုသမှုခံယူပြီးနောက် Clavulanic acid သည်သုတ်ရည်လွှတ်မှုနှင့် intromissions အရေအတွက်နှစ်မျိုးလုံးကိုတိုးစေပြီး SSRI၊ paroxetine သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကိုလျှော့ချပေးခဲ့သည် 76။ ပုံ clavulanic အက်ဆစ်ဂန္ထဝင် neurotransmitter receptors တစ်စီးရီးမှခညျြနှောငျဘူး 75, ဒါပေမယ့်ယဉ်ကျေးမှုအာရုံခံဆဲလ်လိုင်းများ (PC12 နှင့် SH ‐ SY5Y ဆဲလ်များ) ဆွအတွက်အတော်လေးမြင့်မားသော clavulanic acid ကိုအာရုံစူးစိုက်မှု (100 μM) နှင့်အတူဆွဖြစ်ကောင်း neurosecretion နှင့်တွေ့နေကျမဟုတ်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အရေးပါမှု၏ပရိုတိန်းနှစ်ခုမှစည်းနှောင်ခြင်းအားဖြင့်, dopamine ၏လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ခဲ့သည် 78။ anxiolytic နှင့် erectile သက်ရောက်မှုများနှင့်အတူ clavulanic အက်ဆစ်၏မျှော်မှန်းထားသော ဦး နှောက်အာရုံကြောများ 1-10 pM ၏အကွာအဝေး၌ရှိကြ၏ 75။ ဒီယန္တရားဟာ dopamine D ကိုတစ်အခန်းကဏ္ဍနောက်ထပ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကထောက်ခံခဲ့သည် play နိုင်2 အဲဒီ receptor ရန်ကြွက်များတွင် clavulanic အက်ဆစ်၏လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှု antagonizes 79။ အဆုံးစွန်သောလေ့လာမှုမှာ intraperitoneal ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ် clavulanic အက်ဆစ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု apomorphine နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်နှင့် apomorphine အလိုအလျောက်စိုက်ထူ၏နံပါတ်အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှု - မှီခိုတိုး, clavulanic အက်ဆစ်များအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှု - တုံ့ပြန်မှုကွေးအများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူခေါင်းလောင်းခဲ့ 1 mg / kg ပြီးတော့ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများနှင့်အတူလျော့ကျလာသည် 80။ အဆိုပါစာရေးဆရာ dopamine လွှတ်ပေးရန် incrementing အပြင်, clavulanic အက်ဆစ်လည်း 5-HT မှာ serotonin သရုပ်ဆောင်များ၏လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါအကြံပြု2C mianserin အဖြစ် receptors လည်း clavulanic အက်ဆစ်၏လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှု antagonized ။ တစ်ဦးကအဆင့် II ကိုလေ့လာမှုလူနာ clavulanic များ၏ထိရောက်မှုဆန်းစစ်ဘို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမယ့်ကိုဆိုင်းငံ့ခဲ့သည် 11။ ပြဿနာများကိုတစ်စီးရီးလိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် erectile function ကိုအပေါ် clavulanic အက်ဆစ်များအတွက်ခေါင်းလောင်း-shaped ထိုး-တုံ့ပြန်မှုကွေးများအတွက်ရှင်းလင်းချက်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ပစ်မှတ် (s) ကိုအပါအဝင် clavulanic အက်ဆစ်အဘို့ဖြေရှင်းခံရဖို့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ dopamine reuptake ပို့ဆောင်ရေးတားစီး
ကိုကင်းအပါအဝင်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများပုံမှန်အားဖြင့်အဓိကနျူကလိယ accumbens ထဲမှာ, forebrain ၏ mesotelencephalic ဆုလာဘ် / အားဖြည့် circuity အတွင်း dopamine မြှင့်တင်ရန်ထင်နေကြတယ် 81ဒါပေမယ့် subcallosal cortex caudate, putamen, Basal forebrain, thalamus, insula, hippocampus, parahippocampal gyrus, cingulate, ယာယီ cortical, parietal cortex, အပို-striatal cortical နှင့် pons အပါအဝင်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်များကလေ့လာတွေ့ရှိသည်အခြားလမ်းကြောင်းလည်းကင်းအလွဲသုံးစားမှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ 82။ ထိုမှတပါး, CNS ဖို့ pharmacokinetics နှင့်လျင်မြန်စွာထိုးဖောက်မှုကိုကင်းများ၏အလွဲသုံးစားမှုများအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ 83။ ကိုကင်း noradrenaline, dopamine နှင့် serotonin ၏ Synaptic ပြင်းအားကိုတိုးမြှင့်ပေးသော noradrenaline (NET), dopamine (DAT) နှင့် serotonin (SERT) အတွက် Pre-Synaptic သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ကိုကင်းလိင်စိတ်နိုးထတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် penile စိုက်ထူဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ 84ဒါပေမယ့်ကင်း၏နာတာရှည်အသုံးပြုမှုကိုလူ ED နှင့်ဆက်စပ်နေသည် 85။ : D1/D5 SCH39166 (ecopipam) နဲ့တူရန်ကင်း၏ပျော်ရွှင်ဖွယ်သက်ရောက်မှု attenuate နိုင်ပါတယ် 86။ ဗဟိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုကင်းပုံ hippocampus အတွက်α-adrenoceptors ကိုသက်ဝင်, noradrenergic neurotransmission မှတဆင့်ကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ် 87။ အရံအဆင့်မှာ endothelin-1 ၏တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်အတူကင်း-သွေးဆောင် endothelial ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်လျှော့ချနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်နှင့် vasoconstriction ကင်း-သွေးဆောင် ED အထောက်အကူပြုရန်ရှာတွေ့ခဲ့သည် 85။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် monoamine ပို့ဆောင်ရေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ erectile function ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမူးယစ်ဆေးဝါး dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး selection ရှိသင့်ကြောင်းအကြံပြုထားတဲ့ဦးနှောက်-activated ဒေသများနှင့်ကိုကင်းဦးနှောက်-activated ဒေသများ၏ပုံမှန် erectile function ကို, အကြားဆက်ဆံရေးကောင်းပြသပါ။ ထို့အပြင် dopamine reuptake ၏တားစီးတစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းစတင်ခြင်းမပါဘဲတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးကင်းဘို့စောင့်ကြည့်လေ့လာအဖြစ်အလွဲသုံးစားမှုမှရှောင်ရှားရန်အဘို့အရည်ရွယ်ပြီးရပါမည်။
စိတ်မကျဆေး Antidepressants အဆိုပါ monoamine ပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ကွဲပြားဒီဂရီနှင့်ပြုမူ။ ရွေးချယ်ခြင်းဥပမာ fluoxetine များအတွက် SSRI အားဖြင့် SERT ၏တားစီး, အဘို့အမြင့်မားသည်နှင့်, ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ သူ့ဟာသူစီးပွားပျက်ကပ်ကြောင့်ခက်ခဲမူးယစ်ဆေးထို့အပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအနေဖြင့်နာမကျန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခွဲခြားရန်စေသည်။ ခံစားချက်မမှန်အကျိုးစီးပွားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်ကနေစိတ်ခံစားမှုဆုတ်ခွာမရှိခြင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ စိတ်မကျဆေး Antidepressants လျှော့ချလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, စိုက်ထူအခက်အခဲများနှင့်အော်ဂဇင်ပြဿနာများအပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအပေါ်မြောက်မြားစွာသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ SSRI နဲ့ venlafaxine အဆိုးယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသံသရာ (အလိုဆန္ဒ / arousal-စိတ်လှုပ်ရှား-အော်ဂဇင်) ၏အပေါငျးတို့သခြေလှမ်းများထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ တဆယ်ကျပန်းလေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်, bupropion, nefazodone နှင့် mirtazapine SSRIs ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အနိမ့်မှုနှုန်းများ 9, 88နှင့် bupropion သည်အခြားလက္ခဏာဆေးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာတွေသက်သာဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် 89, 90။ Bupropion ယခုအချိန်အထိနှင့်အတူ NET နှင့် SERT ကျော် DAT တချို့ selection နှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောလက္ခဏာဖြစ်ပါသည် Ki သုံးယောက်ပို့ဆောင်ရေးများအတွက်အသီးသီး 526, 52,600 နှင့် 9100 ၏တန်ဖိုးများ (nm) ။ ကြွက်များတွင် MPOA အတွက် bupropion ၏ပြုတ်ရည် microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာ dopamine တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူ evoked 91, ဒါပေမယ့် bupropion ၏တစ် ဦး မဟုတ်ဘဲမြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှု (10 မီလီမီတာ) အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစောငျ့ရှောကျဖို့လျှောက်ထားခဲ့ကြရသည် 91 MPOA သည် bupropion ၏အဓိကနေရာမဟုတ်ကြောင်း၊ စူးရှသောပြုတ်ရည်အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသည်အခြား anti-erectile လမ်းကြောင်းများကိုသက်ရောက်စေကြောင်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ bupropion ကိုစနစ်တကျအုပ်ချုပ်မှုသည်ကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူခြင်းကိုလျှော့ချပြီး ၁၄ ရက်ကြာ bupropion ကုသမှု (နာတာရှည်ကုသမှု) သည် NET ကိုတားဆီးပေးသော fluoxetine သို့မဟုတ် desipramine နှင့်ကုသမှုနှင့်မတူဘဲကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူခြင်းပြောင်းလဲခြင်းနှင့်မဆက်စပ်ပါ။ 92။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် Synaptic ကွဲအတွက် dopamine မသာတစ်ဦးကို up-စည်းမျဉ်းတစ်လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှုရှင်းပြဖို့ဖြစ်ကောင်းလုံလောက်သောကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ dopamine အကြောင်းအရာအတွက်အပြောင်းအလဲများပြောင်းလဲ dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် 35, 93 နှင့် monoamine ပို့ဆောင်ရေး၏ဗဟိုသရုပ်ဆောင် inhibitors ၏ erectile function ကိုအပေါ်စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။
Selegiline သည် MAO B ကို ရွေးချယ်၍ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့ ်၍ မတားဆီးနိုင်သောအရာဖြစ်ပြီးပါကင်ဆန်ရောဂါကုသရာတွင်တစ် ဦး တည်းသော်လည်းကောင်း၊ levodopa နှင့်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်။ MAO B ၏တားစီးမှုကပျက်စီးခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေပြီး dopamine ၏သက်တမ်းကိုကြာရှည်စေလိမ့်မည်။ Selegiline သည်အမ်ဖီတမင်းနှင့်မက်သဖက်ဖီတမင်းအနေဖြင့်ဇီဝြဖစ်စပြုမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်အမ်ဖက်တမင်းနှင့်မက်သာဖက်ဖီတမင်းအဘို့အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း erectile လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ Selegiline သည် PVN တွင် dopamine ၏သက်ရောက်မှုကိုကြွက်များတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည် 94။ ထို့ကြောင့်, selegiline သို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled, crossover လေ့လာမှုမှာ antipsychotic ကုသမှုအတွက်လူနာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကုသမှုများအတွက်3ပတ်ကြာလျှောက်ထားခဲ့သည်။ selegiline မှထုတ်ပေးသော prolactin ကိုလျှော့ချခြင်းအပြင်၊ လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာကုသမှုကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်ဆက်ဆံမှုတွင်ခြားနားမှုမရှိပါ 95.
COMT inhibitors entacapone နှင့် tolcapone တို့ကိုပါကင်ဆန်ရောဂါ၏ end ထိုး end ဆေးဆုံးမှုအဆုံးသတ်ရန်အတွက် levodopa နှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုသောကြောင့် ဦး နှောက်တွင် levodopa ရရှိနိုင်မှုကိုမြင့်တက်စေသည်။ tolcapone သာ ဦး နှောက်ထဲသို့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီး dopamine တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ရှေ့မှောက် cortex နှင့် ventral hippocampus များရှိသော်လည်းအထီးကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မိန်းမ၌ပိုမိုသိသာသည် 96။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ရံ COMT ၏တားစီးကိုလည်း noradrenaline တိုးပွားလာခြင်းရှိမရှိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအပေါ် dopamine တိုးပွားလာ၏ဗဟိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတန်ပြန်တုန်, ဤရှင်းလင်းခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲပါလိမ့်မယ်။
dopaminergic လမ်းကြောင်းများနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်၏ Modulation
ပညာရေး၏ကုသမှုများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးများထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အခါ, သုတ်ရည်လွှတ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းအလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း၏ဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်ဆေးဝါးဗေဒမကြာသေးမီကကျယ်ကျယ်ပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည် 97, 98, ဒီမှာသုတ်ရည်လွှတ်အတွက် dopaminergic လမ်းကြောင်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုသာအကျဉ်းဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ MPOA ပါဝင်သောအဆိုပါ incertohypothalamic လမ်းကြောင်းဟာ ejaculatory တုံ့ပြန်မှုများ၏ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့ပုံရသည်။ တစ်ခုခုကိုအမှု၌, MPOA အတွက် apomorphine ၏ MPOA အတွက် extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဆေးထိုးအထီးကြွက်များတွင်သုက်နှင့် copulatory နှုန်းတိုးမြှင့်အရေအတွက်ကိုအတူသုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန်၏အတိုကောက်သွေးဆောင် 97။ အဆိုပါ dopamine: D3 အဲဒီ receptor သည့် D အဖြစ်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှဟန်2/D3 အဲဒီ receptor agonist 7-hydroxy-N,N-di-n-propyl-2-aminotetralin (7-Oh-DPAT) dopamine: D ၏ပိတ်ဆို့စဉ် ejaculatory အပြုအမူပိုကောင်းစေပါတယ်3 အလွန်အမင်းရွေးချယ်ရန်နှင့်အတူ receptors သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန်နှင့် Post-ejaculatory ဆန့်ကျင်ဘက်ကာလရှည် 99။ ထို့ကြောင့်, D ကို3 အဲဒီ receptor ရန်လည်းအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်၏ကုသမှုများအတွက်အဆိုပြုထားပြီ 97, 7-Oh-DPAT ကျောရိုး contusion ဒဏ်ရာတစ်ခုမော်ဒယ်အတွက် ejaculatory တုံ့ပြန်မှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြန်လည်နာလန်ထူပြခဲ့ပေမယ့် 100။ အဆိုပါ DAT1 Transporter ဗီဇ၏ပြန်လုပ်၏တိုးချဲ့နံပါတ်များနှင့်အတူ polymorphic လူ့အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ဆက်စပ်ခံရဖို့အကြံပြုထားသည် 101က DAT တစ်ခု inhibitor ရှိမရှိလျော့နည်းရှင်းပါတယ်စဉ်, bupropion, ကုထုံးပြင်းအားအတွက်သုတ်ရည်လွှတ်သက်ရောက်သည်။ ဒါကြောင့်: D dopamine တစ်ဦးအကျိုးရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိလူကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲစဉ် Dapoxetine နဲ့ off-တံဆိပ် SSRIs, အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်၏ကုသမှုများအတွက်ထိရောက်မှုနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံများမှာ3 အဲဒီ receptor ရန်။ သုတ်ရည်လွှတ်ပါဝင်ပတ်သက်အဆိုပါလမ်းကြောင်းနေဆဲမလုံလောက်မှု, နားလည်သဘောပေါက်နေကြတယ် 98နှင့်ပညာရေး၏ကုသမှုများအတွက်အထူး dopaminergic လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမူးယစ်ဆေးဝါးများထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကခြုံငုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုသေချာစေရန်လည်းကျန်းမာရေးနှင့်ရောဂါအတွက်သုတ်ရည်လွှတ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့သက်ဆိုင်ရာလိမ့်မည်။
Dopaminergic Pathways နှင့်ဆိုချင်ပါတယ်၏ Modulation Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူလူနာအတွက်လိုအပ်တာလဲ
PDE5 နေသော်လည်း inhibitors ထိရောက်မှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်ကြောင်း, ဒီကုသမှုကိုမလုံလောက်သောသို့မဟုတ်ဆီးချိုရောဂါခံစားနေရပြီး ED နှင့်အတူလူနာဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ, အလိုဏ်ဂူအာရုံကြောထိခိုက်အစွန်းရောက် prostatectomy ခံကြသူ neurodegenerative ရောဂါနှင့်လူနာအပါအဝင် optimized နိုင်ပါတယ်ရှိရာလူနာကြီးမားသောလူဦးရေနေဆဲရှိပါတယ်။ အောက်ပါခုနှစ်, ငါတို့သည် dopaminergic လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲပစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများအကျိုးစီးပွားဖြစ်လိမ့်မည်ကိုရှာဖွေရှိရာဆီးချိုရောဂါနှင့် neurodegenerative ရောဂါအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။ ကျနော်တို့အစွန်းရောက် prostatectomy သို့မဟုတ်တင်ပါးဆုံတွင်းခွဲစိတ်ကုသနှင့် ဆက်စပ်. အာရုံကြောကိုတွေ့ရှိရပါသည်သည်အခြားချဉ်းကပ်မှုလိုအပ်နှင့်ဤတခြားနေရာကိုင်တွယ်လျက်ရှိသည်ကိုရှာဖွေနေချိန်မှာဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါနှင့် ပတ်သက်. ထည့်သွင်းစဉ်းစား၏အတော်များများက, ဆီးချို၏သူတို့အားဆင်တူ 102.
ဆီးချိုရောဂါနှင့် erectile function ကို
ဆီးချိုရောဂါအထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်ထက် ED တစ်သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့စွန့်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် 103-105။ ED ပြုမူဆက်ဆံကြောင်းဆေးခန်းများတွင် comorbidity အဖြစ်ဆီးချိုရောဂါ၏ပျံ့နှံ့% 20-25 ဖြစ်ပါသည် 106။ ၁၀ နှစ်ကြာပြီးနောက်ဆီးချိုရောဂါရှိသူလူငယ်များတွင် glicemic ထိန်းချုပ်မှုအားဖြင့် ED ၏ပျံ့နှံ့မှုကိုလျော့နည်းစေသည် 107။ သို့သော်အဲဒီမှာ PDE5 inhibitors ၏ထိရောက်မှုမရှိခြင်းဆီးချိုရောဂါခံစားနေရပြီးလူနာများ၏ 50% အတွက်ဖြစ်ပြီး, ED 8, 108-110။ ယင်းတွေ့ရှိချက်စိုက်ထူမှာပါဝင်နေတဲ့အရံတစ်သျှူးများ၏ချစ်ခင်အပြင်, ဆီးချိုရောဂါလည်းစိုက်ထူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်အာရုံခံခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအာရုံကြောများ၏ရှုပ်ထွေးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ erectile တစ်ရှူးများနှင့်ဆီးချိုရောဂါအတွက်အရံ parasympathetic အာရုံကြောများ၏ချစ်ခင်ကောင်းစွာဖော်ပြထားသည်။ အကျဉ်းခုနှစ်, endothelial ဆဲလ်ကမောက်ကမဖြစ်မှု, ချောမွေ့ကြွက်သားကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ neuropathy ဆီးချိုကြွက်များနှင့်ဆီးချိုယောက်ျားကနေအထီးကျန်တစ်ရှူးတှငျဖျောပွထားပြီ 111, 112 (Ref ကြည့်ပါ။ 5) ။ ထိုမှတပါး, hypogonadism ED နှင့်အတူ Non-ဆီးချိုရောဂါနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဆီးချိုရောဂါနှင့် ED နှင့်အတူလူနာအတွက်ပိုပြီးပျံ့နှံ့သည်။ ကြောင့် PDE5 inhibitors ၏ထိရောက်မှုမရှိခြင်းရန်, Testosterone နဲ့လည်း Rho kinase လမ်းကြောင်းပစ်မှတ်ထားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူဖြည့်စွက် ED နှင့်ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ပြီးထားပြီး 113-115.
erectile function ကိုပါဝင်ပတ်သက်ဗဟိုလမ်းကြောင်း၏ဆီးချိုရောဂါအားဖြင့်ချစ်ခင်လျော့နည်းကောင်းစွာဖော်ပြထားသည်။ သို့သော်ဆီးချို neuropathy နှင့်အတူလူနာအတွက်ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့% 100 နီးစပ်သူဖြစ်ပါတယ် 116။ အလိုအလျောက်ဆီးချိုရောဂါ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ပု BB / WOR ကြွက်, နှစ်ဦးစလုံးအလယ်ပိုင်းနှင့်အရံ neuropathies နှင့်အတူကြွက်များမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရှာတွေ့ခဲ့သည် 117။ microvascular စီးဆင်းမှုအတွက်လျှော့ချရေး ED နှင့်ဆက်စပ်ရံ neuropathy ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှအကြံပြုထားသည် 118။ အခြားအ mechanims တစ်အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းပုံရသည်။ streptozotocin-သွေးဆောင်အမျိုးအစား 1 ဆီးချိုကြွက်များတွင် NMDA-သွေးဆောင်စိုက်ထူသည့် PVN အတွက်တိုက်ရိုက်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည် 119။ NMDA dopamine ကဲ့သို့တူညီသော oxytocinergic လမ်းကြောင်းလှုံ့ဆော်, ထိုအရပ် ED နှင့် PVN အတွက်အာရုံခံ NOS ၏စကားရပ်လျှော့ချ 119။ အဆိုပါစာရေးဆရာ angiotensin II ကိုအမျိုးအစား 1 (ကို AT နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ကုသမှုနှစ်ခုစလုံးကိုတွေ့1) အဲဒီ receptor ရန်အတွက် streptozocin-သွေးဆောင်ဆီးချိုကြွက်မော်ဒယ်အတွက် erectile function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် 120, 121ဒါပေမယ့် erectile function ကိုအပေါ် dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။
ဆီးချိုရောဂါသည်ဗဟို dopaminergic လမ်းကြောင်းကိုသက်ရောက်စေနိုင်ပြီးရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုသက်သေအထောက်အထားရှိသည်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါ၏အန္တရာယ်မှာဆီးချိုရောဂါမရှိသောလူနာများထက်ဆီးချိုရောဂါရှိသူများအကြား ~ ၄၀% ပိုမိုမြင့်မားသည် 122အဆိုပါအင်ဆူလင်အဲဒီ receptor သွေးဆောင်၏ဦးနှောက်-တိကျတဲ့နောက်ကောက်၏ဦးနှောက်၌၎င်း, အင်ဆူလင်ကိုခုခံ, monoaminoxidase အမျိုးအစား B ကိုအဆင့်တိုးမြှင့် dopamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်လျော့နည်းသွား 123။ မြင့်မားတဲ့ဆီသွေးဆောင်ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူကြွက်များတွင် dopaminergic အာရုံခံတဲ့အရှုံးလည်းမရှိ 124။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ဆီးချိုရောဂါအတွက် dopaminergic လမ်းကြောင်း၏ချစ်ခင်လည်း ED တစ်ကဏ္ဍမှပါစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့သော်ဗဟိုသရုပ်ဆောင် dopaminergic agonist, apomorphine, ဆီးချိုရောဂါများနှင့် ED နှင့်အတူ 130 လူနာအတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာမှနှိုင်းယှဉ်သွေးဆောင်သာအကျိုးသက်ရောက်သဖြင့်, ပုံမှန်တုံ့ပြန်ငယ်ရွယ်ပြီးကောင်းသောများသောထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူရှိ၏ 125။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများအလယ်ပိုင်းမှာ dopaminergic လမ်းကြောင်းမသာ၏မော်ဂျူရှိမရှိနားလည်ရန်လိုအပ်မည်, ဒါပေမယ့်လည်းအရံအဆင့်မှာဆီးချိုရောဂါအတွက် erectile function ကို restore နိုင်ပါသည်။
Neurodegenerative ရောဂါနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု
ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အကြံပြုထားသည့်ကုသမှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုမကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည် 126။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကဤပုံမမှန်နှင့်အတူလူနာအတွက်ဘုံဖြစ်တယ်, ED အရှိဆုံးစိတ်ပျက်စရာဆက်စပ်မသန်စွမ်းတဦးအဖြစ်ယူဆနေသည် 127။ ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့် ED လူနာအများစုတွင် PDE5i နှင့် apomorphine သည်ထိရောက်မှုရှိသည် 42အဆိုပါ apomorphine ၏အကြံပြုထက်ပိုမိုမြင့်မားဆေးများမလိုအပ်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း 127။ အထက်ပါကဏ္inများရှိကွဲပြားခြားနားသော dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အကောင်းဆုံးကုသမှုများကိုလည်းမူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော hypersexuality ကိုလည်းကုသရန်လိုအပ်သည်။
ကျနော်တို့ ED ၏ကုသမှုများအတွက် dopaminergic လမ်းကြောင်း၏မော်ဂျူအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။ dopaminergic agonists ၏တစ်ဦးကစီးရီး dopamine: D ၏အလယ်ပိုင်းကို Activation နှင့်အတူကြွက်များတွင် erectile function ကိုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ2receptors -like နှင့်အဓိကအားဖြင့်: D ၏1အဆိုပါ erectile တစ်ရှူးအတွက် receptors -like ။ အထွေထွေ dopamine agonist apomorphine များအတွက်ကုထုံးပြတင်းပေါက်ကျဉ်းမြောင်းနှင့်အဓိကအားဖြင့်ဗဟို dopamine receptors အပေါ်သရုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, apomorphine ED နှင့်ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်ကျရှုံးဖို့နဲ့ PDE5 inhibitors နဲ့နှိုင်းယှဉ်လျော့နည်းထိရောက်မှုဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ စာပေ၏ပစ္စုပ္ပန် MiniReview အဆိုပါ dopaminergic လမ်းကြောင်း၏မော်ဂျူ ED ၏ကုသမှုတိုးတက်လာဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအဆိုတင်သွင်း။ သို့သော်ဤ penile တုံ့ပြန်မှုမဟာအတော်ကြာအဆင့်ဆင့်မှာ dopaminergic လမ်းကြောင်းပစ်မှတ်ထားတဲ့ဝတ္ထုချဉ်းကပ်မှုလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုမှတပါး, ဆီးချိုရောဂါအဘို့အတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက် dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများထပ်မံစမ်းသပ်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါနှင့် / သို့မဟုတ် neurodegenerative ရောဂါသက်ဆိုင်ရာလိမ့်မည်။
ရှိမုနျကို Comerma-Steffensen Aarhus တက္ကသိုလ်မှကနေပါရဂူဘွဲ့ထောက်ပံ့ကြေးကထောက်ခံခဲ့သည်စဉ် Ulf Simonsen, အမြှေးပါး, Aarhus တက္ကသိုလ်မှ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
1Andersson Ke ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ pharmacological ကုသမှုများအတွက် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်အခြေခံ၏ mechanisms. Pharmacol ဗြာ 2011;63: 811-59 ။
Crossref CAS PubMed Science®၏ Web ကိုGoogle Scholar
2Melis MR, Argiolas အေ penile စိုက်ထူဗဟိုထိန်းချုပ်မှု: အထီးကြွက်များတွင် oxytocin နှင့် dopamine နဲ့အချိုမှုအက်ဆစ်နှင့်အတူ၎င်း၏အပြန်အလှန်၏အခန်းကဏ္ဍကိုတစ်ဦးပြန်လည်စစ်ကြော. neuroscience Biobehav ဗြာ 2011;35: 939-55 ။
3Giuliano က F, ဘာ J ကို, Jardin တစ်ဦးက, ရူးဆိုး JP ။ ကြွက်များတွင်စာနာနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏ Antierectile အခန်းကဏ္ဍ. J ကို Urol 1993;150: 519-24 ။
4Dail WG ကို, Barba V ကို, Leyba L ကို, Galindo R. အာရုံကြောနှင့်ကြွက် penile erectile တစ်ရှူးအတွက် endothelial နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase လှုပ်ရှားမှု. cell တစ်ရှူး Res 1995;282: 109-16 ။
5Gratzke ကို C, Angulo J ကို, Chitaley K ကိုဒိုင် YT ကင်မ် NN, Paick JS et al. ခန္ဓာဗေဒ, ဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ pathophysiology. J ကိုလိင် Med 2010;7: 445-75 ။
Wiley အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက် CAS PubMed Science®၏ Web ကိုGoogle Scholar
6စတိန်းငါဂျုံးစ် LA က, Belkoff LH, Karlin GS, Bowden CH, Peterson, CA et al. erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကုသမှုများအတွက် Avanafil: များတွင်ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူယောက်ျားတစ်ဦးပေါင်းစုံပါ Random, ကို double-မျက်စိကန်းသောလေ့လာမှု. Mayo အဘိဓါန် Clin proc 2012;87: 843-52 ။
7Porst H ကို, ဘားနက်ကတစ်ဦး, Brock, G, Ghanem H ကို, Giuliano က F, Glina S က et al. erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ SOP ရှေးရိုးစွဲ (ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်စက်မှု) ကုသမှု. J ကိုလိင် Med 2013;10: 130-71 ။
8Nehra တစ်ဦးကဂျက်ဆင်, G, Miner M က, Billups KL, ဘားနက် AL, Buvat J ကို et al. erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၏စီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက် Princeton III ကိုနားလည်မှုအကြံပြုချက်များ. Mayo အဘိဓါန် Clin proc 2012;87: 766-78 ။
Crossref PubMed Science®၏ Web ကိုGoogle Scholar
9တေလာ MJ, Rudkin L ကို, Hawton K. လက္ခဏာ-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်မဟာဗျူဟာ: randomized ထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်မှုတွေ၏စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု. J ကို disorders အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု 2005;88: 241-54 ။
10Moll JL, Brown က CS ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏ကုသမှု monoamine pharmacological အေးဂျင့်များအသုံးပြုမှု: စာပေများတွင်သက်သေအထောက်အထား. J ကိုလိင် Med 2011;8: 956-70 ။
11peak TC, Yafi အက်ဖ်အေ, Sangkum P ကို, Hellstrom WJ ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကုသမှုများအတွက်ထွန်းသစ်စမူးယစ်ဆေးဝါးများ. ကျွမ်းကျင်သူ Opin အရေးပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါး 2015;20: 263-75 ။
12Melis MR, Argiolas တစ်ဦးက, Gessa GL ။ Apomorphine-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဟနေခြင်း: ဦးနှောက်အတွက်လုပ်ဆောင်ချက် site ကို. ဦးနှောက် Res 1987;415: 98-104 ။
13Argiolas တစ်ဦးက, Hedlund အိပ်ချ် အဆိုပါဆေးဝါးဗေဒနှင့် apomorphine SL ၏လက်တွေ့ pharmacokinetics. BJU Int 2001;88(ပျော့ပျောင်း 3): 18-21 ။
14Argiolas တစ်ဦးက, Melis MR, Mauri တစ်ဦးက, Gessa GL ။ Paraventricular နျူကလိယကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကြွက်များတွင် apomorphine နှင့် oxytocin အားဖြင့်သော်လည်းမ ACTH အားဖြင့်သွေးဆောင်ဟနေခြင်းနှင့် penile စိုက်ထူကာကွယ်ပေးသည်. ဦးနှောက် Res 1987;421: 349-52 ။
15Chen က KK, ချမ်း JY, Chang LS ။ ကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူ၏ဗဟိုစည်းမျဉ်းထဲမှာ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယမှာ Dopaminergic neurotransmission. J ကို Urol 1999;162: 237-42 ။
16Hull က EM, Muschamp JW, Sato အက်စ် Dopamine နှင့် serotonin: အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု. Physiol ပြုမူနေ 2004;83: 291-307 ။
17Bjorklund တစ်ဦးက, Lindvall အို Nobin အေ ကြွက်များတွင်တစ်ခု incerto-hypothalamic dopamine အာရုံခံစနစ်၏သက်သေအထောက်အထားများ. ဦးနှောက် Res 1975;89: 29-42 ။
18Skagerberg, G, Lindvall O. ကြွက်များတွင်ကျောရိုးမှထုတ်လုပ်တဲ့ diencephalic dopamine အာရုံခံအဖွဲ့. ဦးနှောက် Res 1985;342: 340-51 ။
19Skagerberg, G, Bjorklund တစ်ဦးက, Lindvall အို Schmidt က RH အ။ မူလအစနှင့်ကြွက်များတွင် diencephalo-ကျောရိုး dopamine စနစ်၏ရပ်စဲ. ဦးနှောက် Res Bull 1982;9: 237-44 ။
20Ridet JL, Sandillon က F, Rajaofetra N ကို, Geffard M ကပုဂ္ဂလိကအေ Synaptic ဖြစ်ပွားမှုအပေါ်အထူးအလေးပေးနှင့်အတူ dopamine ဆန့်ကျင်ကာ antiserum အသုံးပြု. အလင်းနှင့်အီလက်ထရွန်ဏုလေ့လာမှု: ကြွက်၏ကျောရိုး dopaminergic စနစ်က. ဦးနှောက် Res 1992;598: 233-41 ။
21Holstege JC, ဗန် DH, Buijs RM, Goedknegt H ကို, Gosens T က, Bongers CM ။ ကြွက်, ကြောင်နှင့်မျောက်ကျောရိုးထဲမှာ dopamine immunoreactivity ၏ဖြန့်ဝေ. J ကို comp Neurol 1996;376: 631-52 ။
22ဗန် DH, Dijk J ကို, Voom P ကို, Holstege JC ။ immunocytochemistry နှင့် in situ Hybrid နှင့်အတူဖော်ထုတ်ကြွက်ကျောရိုးထဲမှာ dopamine D2 အဲဒီ receptor ၏ဒေသခံ. EUR J ကို neuroscience 1996;8: 621-8 ။
Wiley အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက် PubMed Science®၏ Web ကိုGoogle Scholar
23Giuliano က F, Allard ဂျေ Dopamine နှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို. EUR Urol 2001;40: 601-8 ။
24Giuliano က F, Allard J ကို, Rampin အို Droupy S က, Benoit, G, Alexandre L ကို et al. အဆိုပါထုံဆေးကြွက်များတွင် apomorphine ၏ကျောရိုး proerectile အကျိုးသက်ရောက်မှု. int J ကိုသင်ျခြို Res 2001;13: 110-5 ။
25KJ, Musicki B, Palese MA, Crone JK, Becker က RE, Moriarity JL ကိုထိခိုက်စေ et al. endothelial နိုက်ထရစ်-အောက်ဆိုဒ် synthase ၏ Akt-မှီခို phosphorylation penile စိုက်ထူ mediates. proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 2002;99: 4061-6 ။
26Simonsen ဦး, Garcia က-Sacristan တစ်ဦးက, Prieto ဃ penile သွေးလွှတ်ကြောများနှင့်စိုက်ထူ. J ကို Vasc Res 2002;39: 283-303 ။
27Schjorring အို Kun တစ်ဦးက, Flyvbjerg တစ်ဦးက, Kirkeby HJ, Jensen JB, Simonsen U. flow-evoked vasodilation Zucker ဆီးချိုဖက်တီးကြွက်များကနေ penile သွေးလွှတ်ကြောများတွင်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေဖြစ်ပါတယ်. J ကိုလိင် Med 2012;9: 1789-800 ။
28Lue TF, Tanagho EA ၏။ စိုက်ထူခြင်းနှင့်ခွန်အားမရှိခြင်း၏ pharmacological စီမံခန့်ခွဲမှု၏ဇီဝကမ္မဗေဒ. J ကို Urol 1987;137: 829-36 ။
29el-ဒင်ဟာ MM, Senbel လေး, Daabees TT, Sharabi FM ရေ။ dopaminergic receptors ၏ Peripheral မော်ဂျူကြွက်များတွင် erectile တုံ့ပြန်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှု. အခြေခံပညာ Clin Pharmacol Toxicol 2007;100: 225-32 ။
30ဟွန် JS, Bivalacqua တီဂျေ, Baig MR, ယန် Dy, Leungwattanakij S က, Abdel-မာဂုပညာရှိတစ်ဦးက et al. ကြွက် Corpus cavernosum အတွက်အရံ dopamine D1 နှင့် D2 receptors ၏ Localization. BJU Int 2002;90: 105-12 ။
31Emmanuele di Villa Bianca R၊ Sorrentino R၊ Roviezzo F၊ Imbimbo C၊ Palmieri A၊ De Dominicis G et al. apomorphine ၏နှင့်လူ့ Corpus cavernosum strips တွေအပေါ်တစ်ဦး D1 ရွေးချယ်အဲဒီ receptor agonist ၏ Peripheral အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှု. int J ကိုသင်ျခြို Res 2005;17: 127-33 ။
32ဟန် DH, Chae MR, ဒါကြောင့်ငါပန်းခြံ JK, Lee က SW ။ Corpus cavernosal ချောမွေ့ကြွက်သားဆဲလ်များတွင်ကယ် Ca လိုင်းများနှင့် signal ကို transduction ယန္တရားအပေါ် dopamine အဲဒီ receptor agonists ၏ဆိုးကျိုးများ. int J ကိုသင်ျခြို Res 2008;20: 53-9 ။
33Mignini က F, Traini အီး, Tomassoni: D, Amenta အက်ဖ် ကြွက် thymus နှင့်သရက်ရွက်ထဲမှာ Dopamine plasma အမြှေးပါး Transporter (DAT): တစ်ဦး immunochemical နှင့် immunohistochemical လေ့လာမှု. Auton Autacoid Pharmacol 2006;26: 183-9 ။
Wiley အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက် CAS PubMedGoogle Scholar
34Pfeil ဦး, Kuncova J ကို, Bruggmann: D, Paddenberg R ကို, Rafiq တစ်ဦးက, Henrich M က et al. အခ်ါသွေးကြော dopamine - splanchnic ရေယာဉ်များအတွက် hypoxia-သွေးဆောင် vasodilatation ၏အဓိက modulator တွေကို. J ကို Physiol 2014;592: 1745-56 ။
35Beaulieu JM, Espinoza S က, Gainetdinov RR ။ Dopamine receptors - IUPHAR ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 13. br J ကို Pharmacol 2015;172: 1-23 ။
36Kebabian JW ။ နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက် dopamine receptors ၏အကွိမျမြားစှာအတန်း: dopamine-အထိခိုက်မခံ adenylyl cyclase များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု. ဘဝကသိပ္ပံ 1978;23: 479-83 ။
37Heaton JP ။ apomorphine SL ၏လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေကနေ Key ကိုကိစ္စများ. ကမ္ဘာ့ဖလား J ကို Urol 2001;19: 25-31 ။
38Hsieh GC, Hollingsworth PR, Martino B, Chang R, Terranova MA, O'Neill AB et al. သတိကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူထိန်းညှိဗဟိုယန္တရားများ: apomorphine ၏ proerectile အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. dopaminergic စနစ်များ. J ကို Pharmacol Exp Ther 2004;308: 330-8 ။
39Baskerville က TA, ဒေါက်ဂလပ် AJ ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက် dopamine နဲ့ oxytocin အကြားဆက်သွယ်မှုသည်. prog ဦးနှောက် Res 2008;170: 277-90 ။
40Matsumoto K ကို Yoshida M က, Andersson Ke, Hedlund P. ကြွက် corpus cavernosum အတွက် apomorphine အားဖြင့်စသည်တို့နှင့် vivo အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ. br J ကို Pharmacol 2005;146: 259-67 ။
41Heaton JP, Morales တစ်ဦးက, အဒမ်, MA, Johnston B, el Rashidy R. apomorphine ၏ပါးစပ်အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့် erectile function ကို၏ပြန်လည်နာလန်ထူ. Urology 1995;45: 200-6 ။
42Heaton JP, Altwein je ။ အထီး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏ကုသမှု apomorphine SL ၏အခန်းကဏ္ဍကို. BJU Int 2001;88(ပျော့ပျောင်း 3): 36-8 ။
43Maclennan KM, Boshier တစ်ဦးက, Wilton LV, Shakir လုပ် SA ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်ကုသမှုအဖြစ်အင်္ဂလန်အတွက်ယေဘုယျအလေ့အကျင့်အတွက်သတ်မှတ်ထားသော apomorphine များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အသုံးပြုမှုများ၏စာမေးပွဲ. BJU Int 2006;98: 125-31 ။
44Schulz တစ်ဦးက, Oehler B, မြို့ပြ N ကို, Schaefer M က, ဟေးလ် K. Apomorphine TRPA1 လိုင်းများတစ် bimodal modulator တွေကိုဖြစ်ပါသည်. Mol Pharmacol 2013;83: 542-51 ။
45Senbel လေး။ penile စိုက်ထူ၏အရံထိန်းချုပ်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်နှင့် dopaminergic ဂီယာအကြားအပြန်အလှန်. Fundam Clin Pharmacol 2011;25: 63-71 ။
46Sharifzadeh M က, Dehpour AR, Samini M က, ခေါင်းဆောင် Hassan-Mazandarani H ကို, Samadian T က, Asghari ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ ကြွက်များတွင်နာတာရှည်လီသီယမ်အားဖြင့် bromocriptine-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူ၏ ALTER. J ကို Psychopharmacol 1996;10: 157-61 ။
47Baskerville က TA, Allard J ကို, Wayman ကို C, ဒေါက်ဂလပ် AJ ။ penile စိုက်ထူအတွက် Dopamine-oxytocin interaction က. EUR J ကို neuroscience 2009;30: 2151-64 ။
48Radosavljevic M က, Pajovic B, Radunovic M က, Radojevic N ကို, Bjelogrlic ခ Wistar ကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူအပေါ် dihydroergotoxine, bromocriptine နှင့် ergotamine ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု. J ကို Androl 2012;33: 866-71 ။
49le FB, Collo, G, Rabiner EA ၏, Boileau ငါ Merlo PE, Sokoloff P. မူးယစ်ဆေးစွဲကုသမှုများအတွက် Dopamine D3 အဲဒီ receptor ligands: မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်အပေါ် update ကို. prog ဦးနှောက် Res 2014;211: 255-75 ။
50Sokoloff P ကို, Diaz J ကို, Le FB, Guillin အို Leriche L ကို, Bezard E ကို et al. အဆိုပါ dopamine D3 အဲဒီ receptor: အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်များ၏ကုသမှုများအတွက်ကုထုံးပစ်မှတ်. CNS Neurol disorders မူးယစ်ဆေးပစ်မှတ် 2006;5: 25-43 ။
51de La Pena Zarzuelo အီး, Hernandez ကာန V ကို, Llorente AC အ။ [cabergoline ကြောင့်ကုသမှုအလယ်တန်း Priapism: ဤအသင်းအဖွဲ့၏ပထမဦးဆုံးဖော်ပြချက်]. Actas Urol ESP 2010;34: 487-8 ။
52Cannas တစ်ဦးက, Meloni M က, Mascia MM, Solla P ကို, Orofino, G, Farris R ကို et al. တစ်ဦးသက်ကြီးရွယ်အိုများ parkinsonian လူနာအတွက် rotigotine နှင့်ဆက်စပ် Priapism နှင့် hypersexuality: တစ်ကိစ္စတွင်အစီရင်ခံစာ. Clin Neuropharmacol 2016;39: 162-3 ။
53Spagnul SJ, Cabral PH သည်, Verndl DO, Glina အက်စ် Adrenergic alpha-blockers: priapism တစ်ခုခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောနှင့်သတိမမူအကြောင်းမရှိ. int J ကိုသင်ျခြို Res 2011;23: 95-8 ။
54Worthington JJ III ကိုရှိမုန်မိုင်, Korbly NB, Perlis RH အ, Pollack MH ။ လက္ခဏာ-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက် Ropinirole. int Clin Psychopharmacol 2002;17: 307-10 ။
55Melis MR, Succu S က, Sanna က F, Melis T က, Mascia က MS, Enguehard-Gueiffier ကို C et al. PIP3EA နှင့် PD-168077 နှစ်ခုရွေးချယ် dopamine D4 အဲဒီ receptor agonists, အထီးကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူသွေးဆောင်: ဦးနှောက်အတွက်လုပ်ဆောင်ချက် site ကိုနှင့်ယန္တရား. EUR J ကို neuroscience 2006;24: 2021-30 ။
56Melis MR, Succu S က, Mascia က MS, Argiolas အေ အထီးကြွက်များ၏ paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ PD-168077 တစ်ဦးရွေးချယ် dopamine D4 အဲဒီ receptor agonist, penile စိုက်ထူ induces. neuroscience လက်တ 2005;379: 59-62 ။
57Brioni JD, Moreland RB, Cowart M က, Hsieh က GC, Stewart ကသည် AO, Hedlund P ကို et al. ABT-4 အားဖြင့် dopamine D724 receptors ၏ activation ကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူ induces. proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 2004;101: 6758-63 ။
58Patel ကသင်္ဘော MV, Kolasa T က, Mortell K ကို Matulenko MA, Hakeem AA ကို, Rohde JJ et al. 3-methyl- ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုN- (1-oxy-3 '4'5'6'-tetrahydro-2'H- [2,4'-bipyridine] -1'-ylmethyl) benzam IDE (ABT-670), တစ်ဦးနှုတ် bioavailable dopamine D4 agonist erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကုသမှုများအတွက်. J ကို Med Chem 2006;49: 7450-65 ။
59Meador-Woodruff JH, Mansour တစ်ဦးက, ယူဆပါတယ် DK, Damask SP, Civelli အို Watson ဟာ SJ ဂျူနီယာ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ D5 dopamine အဲဒီ receptor mRNA ၏ဖြန့်ဝေ. neuroscience လက်တ 1992;145: 209-12 ။
60Khan က zu, Gutierrez တစ်ဦးကမာတင် R ကို, Penafiel တစ်ဦးက, Rivera တစ်ဦးက, de la Calle အေ ကြွက်နှင့်လူ့ဦးနှောက်၏ Dopamine D5 receptors. neuroscience 2000;100: 689-99 ။
61Kudwa AE, Dominguez-Salazar အီး, Cabrera DM, Sibley DR, Rissman EF ။ Dopamine D5 အဲဒီ receptor ကြွက်တွေမှာယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ modulates. Psychopharmacology 2005;180: 206-14 ။
62လူငယ်တို့ SL, တေလာက M, Lawrie သည် SM ။ "ပထမဦးစွာမခိုပြုပါ" ။ antipsychotic ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု. J ကို Psychopharmacol 2015;29: 353-62 ။
63Jeong HG, Lee ကက MS, Lee က hy, Ko YH, ဟန်ကို C, ဂျိုး SH ။ အထီး schizophrenia လူနာ aripiprazole မှ switching ပြီးနောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုနှင့် gonadal ဝင်ရိုးဟော်မုန်းအတွက်အပြောင်းအလဲများ: တစ်အလားအလာရှေ့ပြေးလေ့လာမှု. int Clin Psychopharmacol 2012;27: 177-83 ။
64Schmidt က HM, Hagen က M, Kriston L ကို, ပျံဝဲ-Weiser K ကို Maayan N ကို, Berners MM ။ antipsychotic မူးယစ်ဆေးကုထုံးကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏စီမံခန့်ခွဲမှု. Cochrane ဒေတာဘေ့စ Syst ဗြာ 2012;11: CD003546 ။
65Landen M က, Eriksson အီး, Agren H ကို, Fahlen တီ ရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitors နဲ့ကုသစိတ်ဓာတ်လူနာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ် buspirone ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု. J ကို Clin Psychopharmacol 1999;19: 268-71 ။
66Landen M က, Bjorling, G, Agren H ကို, Fahlen တီ ကုသမှု-ဆန့်ကျင်ဘက်စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်တစ်ဦး SSRI နဲ့ပေါင်းပြီး buspirone ၏ကျပန်း, ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး. J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 1998;59: 664-8 ။
67Bergman J ကို, ခေါင်မိုး RA, Furman, CA, Conroy JL, Mello NK, Sibley DR et al. buspirone (buspar (R)) အားဖြင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြုပြင်မွမ်းမံ: D3 နှင့် D4 dopamine receptors ၏အလားအလာပါဝင်ပတ်သက်မှု. int J ကို Neuropsychopharmacol 2013;16: 445-58 ။
68Protais P ကို, ဝင်ဆာက M, Mocaer အီး, Comoy အီး ကြွက်များတွင် apomorphine, physostigmine နှင့် mCPP အားဖြင့်သွေးဆောင်ဟနေခြင်းနှင့် penile စိုက်ထူမှာ Post-Synaptic 5-HT1A အဲဒီ receptor ပါဝင်ပတ်သက်မှု. Psychopharmacology 1995;120: 376-83 ။
69Balogh S က, Hendrick SE, Kang ဂျေ amantadine နှင့်အတူ fluoxetine-သွေးဆောင် anorgasmia ၏ကုသမှု. J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 1992;53: 212-3 ။
CAS PubMed Science®၏ Web ကိုGoogle Scholar
70Angrist B, ဂေရရှုန်အက်စ် လိင်နှင့်ကျူးကျော်အပေါ်စိတ်ကြွဆေးနဲ့ L-DOPA ၏လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများ. Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု 1976;17: 715-22 ။
71Rothman RB, Baumann MH, Dersch CM, ရိုမီယို DV, ဆန် KC, ကာရိုး FI et al. ဖက်တမင်းဆေးပြား-type အမျိုးအစားဗဟိုအာရုံကြောစနစ်စိတ်ကြွဆေးပိုပြီးအစွမ်းထက်သူတို့ dopamine နှင့် serotonin လွှတ်ပေးရန်ထက် norepinephrine လွှတ်ပေးရန်. synapses 2001;39: 32-41 ။
72tar MT, Martinez LR, Nosanchuk JD, ဒေးဗီးစ် KP ။ erectile function ကိုတစ်ဦးကိုတိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်ပေါ်စိတ်ကြွဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်. Andrology 2014;2: 531-6 ။
73Mansergh, G, Shouse RL, Marks, G, Guzman R ကို, Rader M က, Buchbinder S က et al. စိတ်ကြွဆေးနှင့် sildenafil (Viagra) ကိုအသုံးပြုခြင်းလိင်တူဆက်ဆံသူကိုယောက်ျား၏နမူနာအတွက်အသီးသီးအကာအကွယ်မဲ့လက်ခံနှင့် INSERT စအိုလိင်ဆက်ဆံနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်. လိင် Transm Infect 2006;82: 131-4 ။
74Prestage, G, Jin က F ကို, Kippax S က, Zablotska ငါ Imrie J ကို, Grulich အေ ဆစ်ဒနီ, သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့လိင်တူချစ်သူလူတို့တွင်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆေးဝါးများနှင့်နောက်ဆက်တွဲ HIV ပိုးကူးစက်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း. J ကိုလိင် Med 2009;6: 2311-20 ။
75Kim က DJ သမားဘုရင်ဂျာ Zuccarelli L ကို, ကူးတို့ CF, Koppel GA, Snowdon မှန် CT et al. Clavulanic acid ကို: ဝတ္ထု anxiolytic ကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ beta ကို-lactamases နှင့်အနည်းငယ်မျှသာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုယှဉ်ပြိုင် inhibitor. Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 2009;93: 112-20 ။
76ချမ်း JS, Kim က DJ သမား, Ahn CH, Oosting RS, Olivier ခ Clavulanic acid ကိုအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုလှုံ့ဆျော. EUR J ကို Pharmacol 2009;609: 69-73 ။
77Nakagawa H ကို, Yamada က M, Tokiyoshi K ကို Miyawaki Y ကို, Kanayama တီ [neurosurgical လူနာ cerebrospinal fluid သို့ပိုတက်စီယမ် clavulanate / ticarcillin ဆိုဒီယမ်၏ထိုးဖောက်မှု]. Jpn J ကိုပဋိဇီဝဆေး 1994;47: 93-101 ။
78Kost GC, Selvaraj S က, Lee က YB ကင်မ် DJ သမား, Ahn CH, Singh က BB ။ Clavulanic acid ကိုတိုးမြှင့်တွေ့နေကျမဟုတ်သောလူကုန်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့ယန္တရားမှတဆင့်အာရုံခံဆဲလ်ထဲမှာ dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးပွါး. neuroscience လက်တ 2011;504: 170-5 ။
79Sanna က F, Succu S က, Hubner H ကို, Gmeiner P ကို, Argiolas တစ်ဦးက, Melis MR ။ Dopamine D2 တူသောအဲဒီ receptor agonists အထီးကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူသွေးဆောင်: အ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် D2, D3 နှင့် D4 receptors ၏ differential ကိုအခန်းကဏ္ဍ. ပြုမူနေဦးနှောက် Res 2011;225: 169-76 ။
80Sanna က F, Melis MR, Angioni L ကို, Argiolas အေ Clavulanic acid ကိုအထီးကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဟနေခြင်း induces: apomorphine နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်. Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 2013;103: 750-5 ။
81ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ. ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗြာ 1993;18: 247-91 ။
82Breiter HC, Gollub RL, Weisskoff RM, ကနေဒီ DN, Makris N ကို, Berke JD et al. လူ့ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကိုကင်း၏ acute ဆိုးကျိုးများ. အာရုံခံဆဲလျ 1997;19: 591-611 ။
83Chow HS, Chen က Z ကို, Matsuura GT ကို။ ကြွက်များတွင် intranasal ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါဦးနှောက်ဖို့နှာခေါင်းလိုင်ကနေကင်း၏တိုက်ရိုက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး. J ကို Pharm သိပ္ပံ 1999;88: 754-8 ။
84Cregler ll, မာကုအိပ်ချ် ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာများ. N ကို Engl J ကို Med 1986;315: 1495-500 ။
85Kendirci M က, Pradhan L ကို, Trost L ကို, ဂုရက S, ချန်ဒရာက S, Agrawal KC et al. နာတာရှည်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းတစ်ဦးကြွက်မော်ဒယ်အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ Peripheral ယန္တရားများ. EUR Urol 2007;52: 555-63 ။
86Romach MK, ကော် P ကို, Kampman K ကို Kaplan HL, Somers ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, ရေကူးကန် S က et al. အဆိုပါ dopamine D1 / D5 ရန် ecopipam အားဖြင့်ကိုကင်းများ၏ပျော်ရွှင်ဖွယ်သက်ရောက်မှု (SCH 39166) ၏ attenuation. Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 1999;56: 1101-6 ။
87Chang-AY, ချမ်း JY, ချမ်း SH ။ တစ်ပြိုင်တည်းပါ EEG desynchronization နှင့်ကြွက်များတွင်ကင်းသဖြင့်သွေးဆောင် penile စိုက်ထူ၏တားစီးအတွက် Hippocampal noradrenergic neurotransmission. br J ကို Pharmacol 2000;130: 1553-60 ။
88Coleman CC ကိုဘုရင် BR, Bolden-Watson ကို C, စာအုပ် MJ, Segraves RT ကို, ရစ်ချတ် N ကို et al. bupropion ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်သက်ရောက်မှု၏ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled နှိုင်းယှဉ်လွှတ်ပေးရန်နှင့် fluoxetine ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်. Clin Ther 2001;23: 1040-58 ။
89Gitlin MJ, Suri R ကို, Altshuler L ကို, Zuckerbrow-Miller က J ကို, Fairbanks L. SSRI-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုကုသမှုအဖြစ် Bupropion-ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်လွှတ်ပေးရန်. J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther 2002;28: 131-8 ။
90တေလာ MJ, Rudkin L ကို, Bullemor-Day ကို: P, Lubin J ကို, Chukwujekwu ကို C, Hawton K. လက္ခဏာဆေးဝါးအားဖြင့်သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်မဟာဗျူဟာများ. Cochrane ဒေတာဘေ့စ Syst ဗြာ 2013;5: CD003382 ။
91Adachi H ကို, Sato Y ကို, Kato R ကို, Hisasue S က, ဆူဇူကီး K ကို Masumori N ကို et al. အထီးကြွက်များတွင် reflex နှင့် noncontact စိုက်ထူအပေါ် medial preoptic ဧရိယာ၌ dopamine ၏စည်းရုံးရေးမှူးများအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုတိုက်ရိုက်အထောက်အထား. J ကို Urol 2003;169: 386-9 ။
92Sukoff Rizzo SJ, Schechter LE, Rosenzweig-Lipson အက်စ် ကြွက်များတွင်လက္ခဏာ-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုခန့်မှန်းဘို့တစ်ဦးကဝတ္ထုချဉ်းကပ်. Psychopharmacology 2008;195: 459-67 ။
93Beaulieu JM, Gainetdinov RR ။ dopamine receptors ၏ဇီဝြဖစ်စဉ်, အချက်ပြများနှင့်ဆေးဝါးဗေဒ. Pharmacol ဗြာ 2011;63: 182-217 ။
94Allard J ကို, ဘာ J ကို, Derdinger က F, Alexandre L ကို, McKenna K ကို Giuliano အက်ဖ် Selegiline ထုံဆေးကြွက်များတွင် hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် dopamine ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် erectile လှုပ်ရှားမှုပိုကောင်းစေပါတယ်. int J ကိုသင်ျခြို Res 2002;14: 518-22 ။
95Kodesh တစ်ဦးက, Weizman တစ်ဦးက, Aizenberg: D, Hermesh H ကို, Gelkopf M က, Zemishlany Z. neuroleptics အပေါ်ထိန်းသိမ်းထား schizophrenic လူနာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏ကုသမှု Selegiline: တစ်ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု. Clin Neuropharmacol 2003;26: 193-5 ။
96Laatikainen LM, Sharp က T က, Harrison PJ, Tunbridge EM ။ catechol- ၏လိင် dimorphic ဆိုးကျိုးများO-methyltransferase (COMT) မျိုးစုံဦးနှောက်ဒေသများတွင် dopamine ဇီဝြဖစ်ပေါ်တားစီး. PLoS ONE 2013;8: e61839 ။
97Giuliano က F, Clement P. အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်၏ကုသမှုများအတွက်ဆေးဝါးဗေဒ. Pharmacol ဗြာ 2012;64: 621-44 ။
98Clement P ကို, Giuliano အက်ဖ် သုတ်ရည်လွှတ်၏ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်ဆေးဝါးဗေဒ. အခြေခံပညာ Clin Pharmacol Toxicol 2015; Doi: 10.1111 / bcpt.12546.
Wiley အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက် PubMedGoogle Scholar
99Clement P ကို, Pozzato ကို C, Heidbreder ကို C, Alexandre L ကို, Giuliano က F, Melotto အက်စ် ကြွက်များတွင် SB-277011 တစ်ဦးရွေးချယ် dopamine D3 အဲဒီ receptor ရန်အားဖြင့်သွေးဆောင်သုတ်ရည်လွှတ်၏နှောင့်နှေး,. J ကိုလိင် Med 2009;6: 980-8 ။
100Kozyrev N ကို, Staudt MD, ဘရောင်းတစ်ဦးက, Coolen LM ။ နာတာရှည် contusion ကျောရိုးဒဏ်ရာအထီးကြွက်များတွင် ejaculatory တုံ့ပြန်မှုချို့ယွင်း: dopamine D3 အဲဒီ receptor agonist ၏စနစ်တကျတာဟာအားဖြင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြန်လည်နာလန်ထူ 7OHDPAT. J ကို Neurotrauma 2016;33: 943-53 ။
101Safarinejad MR ။ အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်းနှင့် dopamine Transporter ဗီဇ (SLC6A3) ၏မျိုးဗီဇ polymorphic အကြားဆက်ဆံရေးမျိုး. BJU Int 2011;108: 292-6 ။
102el-သိကြားမင်း AI အ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် intracavernosal ဆေးထိုး၏လက်ရှိအခန်းကဏ္ဍကဘာလဲ? int J ကိုသင်ျခြို Res 2016;28: 88-95 ။
103Feldman HA, စတိန်းငါ Hatzichristou DG, Krane RJ, McKinlay JB ။ သင်ျခြိုနှင့်၎င်း၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု: အမက်ဆာချူးဆက်အမျိုးသားအိုမင်းခြင်းဟာလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို. J ကို Urol 1994;151: 54-61 ။
104ဂျိုဟန်သမဝါယမ, Araujo AB, Feldman HA, ဒါဘီ, CA, Kleinman KP, McKinlay JB ။ အသက် ၄၀ မှ ၆၉ နှစ်အတွင်းရှိအမျိုးသားများတွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ပွားမှု - မက်ဆာချူးဆက်အမျိုးသားအိုမင်းလေ့လာမှုမှရလဒ်. J ကို Urol 2000;163: 460-3 ။
105မာတင်-Morales တစ်ဦးက, Sanchez-Cruz JJ, Saenz က de Tejada ငါ Rodriguez-Vela L ကို, Jimenez-Cruz JF, Burgos-Rodriguez R. ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်စပိန် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်လွတ်လပ်သောအန္တရာယ်အချက်များ: အ Epidemiologia de la Disfuncion Erectil Masculina လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို. J ကို Urol 2001;166: 569-74 ။
106Sairam K ကို Kulinskaya အီး, Boustead GB ကို, Hanbury, DC, McNicholas က TA ။ အထီး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက် undiagnosed များတွင်ဆီးချိုရောဂါ၏ပျံ့နှံ့. BJU Int 2001;88: 68-71 ။
107Wessells H ကို, Penson DF, Cleary P ကို, Rutledge BN, Lachin JM, McVary KT et al. အမျိုးအစား 1 ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် erectile function ကိုအပေါ်အထူးကြပ်မတ်များသောကုထုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု. J ကို Urol 2011;185: 1828-34 ။
108Behrend L ကို, Vibe-Petersen J ကို, Perrild အိပ်ချ် ဝယ်လိုအား, ထိရောက်မှုနှင့်လူနာစိတ်ကျေနပ်မှု: ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏ကုသမှု Sildenafil. int J ကိုသင်ျခြို Res 2005;17: 264-9 ။
109Israilov S က, Shmuely J ကို, င်း E ကို, Engelstein: D, Livne P ကို, Boniel ဂျေ များတွင်ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်တိုးတက်သောကုသမှုအစီအစဉ်၏အကဲဖြတ်. int J ကိုသင်ျခြို Res 2005;17: 431-6 ။
110Porst H ကို, Gacci M က, Buttner H ကို, Henneges ကို C, Boess အက်ဖ် ခြောက်လကျပန်း, ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled, လက်တွေ့လေ့လာမှုများကနေ 1913 လူနာထံမှရရှိသောအချက်အလက်များ၏တစ်ဦးဘက်ပေါင်းစုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: တစ်ချိန်ကနေ့စဉ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် Tadalafil. EUR Urol 2014;65: 455-64 ။
111Tejada ငါတိန်းငါ Azadzoi K ကို Krane RJ, Cohen ကို RA က de Saenz ။ ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်အတူဆီးချိုယောက်ျားထံမှ penile ချောမွေ့ကြွက်သားများချို့ယွင်း• Neurogenic disease အာရုံကြောနှင့် endothelium-mediated အပန်းဖြေ. N ကို Engl J ကို Med 1989;320: 1025-30 ။
112Xie: D, Odronic SI, Wu က F, Pippen တစ်ဦးက, Donatucci CF, နောက်ဆက်တွဲ BH ။ အစားအသောက်များတွင်-သွေးဆောင်များတွင်ဆီးချိုရောဂါကြောင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ mouse ကိုမော်ဒယ်. Urology 2007;70: 196-201 ။
113Sopko NA, Hannan JL, Bivalacqua တီဂျေ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက် Rho kinase လမ်းကြောင်းနားလည်မှုနှင့်ပစ်မှတ်ထား. နတ်ဗြာ Urol 2014;11: 622-8 ။
114Corona, G, Mannucci အီး, Petrone L ကို, Ricca V ကို, Balercia, G, Mansani R ကို et al. တစ်ဦးပြင်ပလူနာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆေးခန်းတက်ရောက်ခြင်းအမျိုးသားများတွင် hypogonadism နှင့်အမျိုးအစား II ကိုဆီးချို၏အစည်းအရုံး. int J ကိုသင်ျခြို Res 2006;18: 190-7 ။
115ဂုရက S, Peak TC, Kadowitz PJ, Sikka SC, Hellstrom WJ ။ ဆီးချိုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း. Curr ဆီးချိုရောဂါဗြာ 2014;10: 61-73 ။
116Matfin, G, Jawa တစ်ဦးက, Fonseca VA သို့။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: အဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါနှင့်အတူ interrelationship. Curr Diab ကိုယ်စားလှယ် 2005;5: 64-9 ။
117McVary KT, Rathnau CH, McKenna Ke ။ ယင်းဆီးချို BB / WOR ကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု: ဗဟို neuropathy တစ်အခန်းကဏ္ဍ. နံနက် J ကို Physiol 1997;272: R259-67 ။
118Cellek S က, ကင်မရွန် NE, cotter MA, Muneer အေ ဆီးချို erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ Pathophysiology: ဝါတော် nervorum ၏အလားအလာအလှူငွေနှင့်အဆင့်မြင့် glycation endproducts. int J ကိုသင်ျခြို Res 2013;25: 1-6 ။
119Zheng H ကို, Bidasee KR, Mayhan WG ကို, Patel က KP ။ အလယ်ပိုင်းနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်မရှိခြင်းဆီးချိုရောဂါအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်း. Integrated comp Physiol စည်းမျဉ်း am J ကို Physiol 2007;292: R1158-64 ။
120Zheng H ကို, လျူက X, Patel က KP ။ အမျိုးအစား 1 ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူကြွက်များတွင်ဗဟိုကမကထပြုခဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: angiotensin II ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် superoxide. J ကိုလိင် Med 2013;10: 2165-76 ။
121Zheng H ကို, Mayhan WG ကို, Patel က KP ။ လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ရေး type ကိုငါဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူကြွက်များတွင်ချွတ်ယွင်းဗဟိုကမကထပြုခဲ့ erectile တုံ့ပြန်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်. J ကိုလိင် Med 2011;8: 3086-97 ။
122Xu မေး, ပန်းခြံ Y ကို, Huang က X ကို, Hollenbeck တစ်ဦး, ဘလဲတစ်ဦးက, Schatzkin တစ်ဦးက et al. ဆီးချိုရောဂါနှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါအန္တရာယ်. ဆီးချိုရောဂါစောင့်ရှောက်မှု 2011;34: 910-5 ။
123Kleinridders တစ်ဦးက, Cai W က, Cappellucci L ကို, Ghazarian တစ်ဦးက, Collins WR, Vienberg စင်ကာပူဒေါ်လာ et al. ဦးနှောက်ထဲမှာအင်ဆူလင်ကိုခုခံ dopamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ပွောငျးလဲနှင့်အမူအကျင့်မမှန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်. proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 2015;112: 3463-8 ။
124Khang R ကို, ပန်းခြံကို C, ရှင် JH ။ DB / DB နှင့်မြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာကြွက်များ၏ substantia nigra အတွက် parkin ၏ Dysregulation. neuroscience 2015;294: 182-92 ။
125Gontero P, D'Antonio R, Pretti, G, Fontana F, Panella M, Kocjancic E et al. ဆီးချိုယောက်ျား၏ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက် apomorphine SL ၏လက်တွေ့ထိရောက်မှု. int J ကိုသင်ျခြို Res 2005;17: 80-5 ။
126Bronner, G, အာရုန်-Peretz J ကို, Hassin-Baer အက်စ် ပါကင်ဆန်ရောဂါ၊ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်အခြားစိတ်ဖောက်ပြန်မှုများရှိသည့်လူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ. Handb Clin Neurol 2015;130: 297-323 ။
127Bronner, G, Vodusek DB ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း. Ther Adv Neurol disorders 2011;4: 375-83 ။